ဒါအျောရီဂငျြနယျပါ – My Blog
တဈခွားသူတှရေောကျကွပွီလား စပယျ အအေးဆိုငျလေးတဈခုရဲ့ ကောငျတာမှာ ငှရှေငျးဖို့တနျးစီနတေုနျး နာမညျချေါပွီး မေးလိုကျတဲ့အသံ ကွောငျ့ ကြှနျမလှညျ့ကွညျ့လိုကျတယျ။ ကြှနျမတဈခါမှမမွငျဖူးတဲ့လူတဈယောကျ…… ဦးထုတျကိုခပျငိုကျငိုကျ ဆောငျးထားတော့ မကျြနှာကိုလညျးသခြောမမွငျရဘူးလေ။ သူကကြောပိုးအိတျခပျကွီးကွီးတဈခုလညျး လှယျထားသေးတယျ။ ရုတျတရကျကွောငျသှားပမေဲ့ ဘယျသူဆိုတာ ကြှနျမမှတျမိလိုကျပါတယျ။ “ အျော……ကိုလတျဇငျလား…..ဘယျသူမှမရောကျကွသေးဘူး စပယျပဲရောကျသေးတာ” အလိုကျသငျ့ပွနျဖွရေငျးသူ့ကိုအကဲခတျကွညျ့လိုကျတယျ။ သူက အှနျလိုငျးကနေ ခငျမငျခဲ့တဲ့ ကြှနျမသူငယျခငျြးပါ။
မနတေ့နကေ့မှ နိုငျငံခွားက ပွနျရောကျပွီး သူငယျခငျြးတှနေဲ့ တှဖေို့ ခြိနျးထားလို့ ကြှနျမလညျး ဒီဆိုငျကိုရောကျနတော။ ဓာတျပုံတှမွေငျဖူးထားပမေဲ့ ရုတျတရကျအပွငျမှာဆိုတော့ ကြှနျမဘယျမှတျမိပါ့မလဲ။ သူကတော့ ကြှနျမကို တနျးပွီးမှတျမိတဲ့အပွငျ အရငျတညျးက အပွငျမှာခငျဖူးတဲ့သူငယျခငျြးလို ရငျးရငျးနှီးနှီးစကားတှဘောတှပွေောရငျး အေးဆေးပါပဲ။ နှဈယောကျသား မှာထားတဲ့အအေးတှရေတော့ စားပှဲတဈခုမှာဝငျထိုငျလိုကျကွတယျ။ “ဟဲဟဲ ကိုလတျဇငျက စပယျ့ကို တနျးမှတျမိတာပဲနျော…စပယျက မှတျမိဝူးတေျာ့” စပျဖွဲဖွဲနဲ့ကြှနျမပွောတော့ သူက “ မှတျမိတာပေါ့ဟ ဓာတျပုံတှဒေီလောကျမွငျဖူးနတော နငျကအပွငျမှာလညျး ဒီရုပျပဲကို “ ကြှနျမရှကျပွုံးလေးပွုံးမိတယျ။
အှနျုလိုငျးမှာဓာတျပုံတငျရငျ လှလှပပပွငျဆငျပွီး ရိုကျ ပွီးတော့မှအလှဆုံးပုံကိုရှေးပွီးတငျတာလေ။ အဲတာကိုအပွငျနဲ့တူတူပဲပွောတော့ပြျောတာပေါ့နျော ။ခနကွာတော့ ခြိနျးထားတဲ့သူငယျခငျြးတှရေောကျလာပွီမို့ ကြှနျမတို့ အငျးလြားကနျဘောငျဘကျကို ထှကျလာခဲ့ကွတယျ။ သူငယျခငျြးတှကေ ခွောကျယောကျ ခုနဈယောကျလောကျတော့ရှိတယျ။ အားလုံးက ကြှနျမနဲ့ အပွငျမှာရငျးနှီးပွီးသားတှပေါ။ ကိုလတျဇငျတဈယောကျကိုပဲ…ခုမှတှဖေူ့းကွတာလေ။ ဒါပမေဲ့ အှနျလိုငျးမှာ ရငျးနှီးပွီးသားသူတှဆေိုတော့ အပွငျမှာလညျး ပွောမနာဆိုမနာတှပေဲ။ သူငယျခငျြးတှကေ နငျ့ကိုကို မပါဘူးလား….လို့ ကြှနျမကိုမေးကွတယျ။ ကြှနျမလညျး သူကနယျမှာနတောဖွဈတဲ့အကွောငျး တဈခါတလမှေ အလုပျကိစ်စနဲ့ ရနျကုနျကိုလာတာဖွဈကွောငျး တဈယောကျလာမေးလိုကျရှငျးပွလိုကျနဲ့ စိတျတောငျညဈလာတယျ တကယျ။
ကနျဘောငျမှာ မုနျ့စားလိုကျ စကားပွောလိုကျ လမျးလြှောကျလိုကျလုပျကွပွီးတော့ အိမျပွနျကွဖို့ အခြိနျရောကျတော့ လမျးကွောငျးတူတဲ့သူတှေ စုပွီး Taxi ငှားဖို့ မေးကွတယျ။ ကိုလတျဇငျရယျ၊ နောကျထပျ ကြှနျမသူငယျခငျြးတဈယောကျရယျက ပွနျမဲ့လမျးတူတော့သုံးယောကျသား Taxi နဲ့အတူပွနျလာကွတယျ။ ပွောရအုံးမယျ အဲဒီသူငယျခငျြးကောငျလေးကလညျး ခငျတာသိပျမကွာသေးပမေဲ့ ငယျပေါငျးလိုပေါငျးတာ။ သူကလညျး ရညျးစားထညျလဲတှဲ ကိုယျကလညျး ရညျးစားနဲ့ဆိုပမေဲ့ တှကွေ့ရငျ ခဈြရယျ သဲရယျဆိုပွီး ပါးလေးကိုငျလိုကျ မေးလေးကိုငျလိုကျ လကျလေးတှဲလိုကျနဲ့ လုပျနကွေတာ။ ကိုကိုကလညျး အဲဒါမြိုး အရမျးသဝနျတိုတတျတာလေ။ အဲဒီကောငျတှနေဲ့မပေါငျးနဲ့လို့မပွောရုံတမယျပဲ။
ကြှနျမကလညျး တားလေ အရှဲ့တိုကျလသေမားဆိုတော့ ကိုကိုက လပွေလေေးထိုးထိုးပွီးပွောရှာပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ကြှနျမတို့က ရိုးရိုးသားသားပေါငျးတာလေ။ ဘာအကနျ့မှမရှိဘူး။ ကိုယျ့စိတျကိုယျလုံတော့ ကြှနျမသူတို့နဲ့ သှားတှတေို့ငျး ကိုကို့ကို ပွောပွပါတယျ။သူသံသယမဖွဈပမေဲ့ ဖုနျးတှတေဂှမျဂှမျဆကျပွီး မပွနျသေးဘူးလား…အခုဘယျမှာလဲ…နောကျကနြပွေီ အိမျမပွနျသေးဘူးလား ဘာညာနဲ့ ဂဈြတိုကျတာမြိုးတှတေော့ ခံရတာပေါ့။ ဇာတျရညျလညျအောငျ နဲနဲရှငျးပွထားအုံးမယျ။ ကြှနျမနာမညျက စပယျပှငျ့ဝါ ပါ။ အသကျ၂၀ကြျောလောကျ ရှိပွီး လောလောဆယျ company တဈခုမှာအလုပျလုပျနတေယျ။ ကြှနျမစာဝငျဝငျရေးဖွဈတဲ့ Online group လေးတဈခုရှိပါတယျ။
အဲဒီကနေ တဆငျ့ သူငယျခငျြးတှရေပွီး ကိုယျ့အနီးအနားမှာနတေဲ့သူတှဖွေဈနရေငျ အပွငျမှာလညျး မွငျဖူးအောငျ ဆုံဖို့ ခြိနျးကွတာပေါ့။ ကိုကိုကလညျး အလုပျကိစ်စနဲ့ရနျကုနျတကျလာတဲ့အခြိနျနဲ့ကွုံနတောနဲ့ တှဖွေ့ဈကွတာပါ။ အမှနျဆိုအှနျလိုငျးမှာက သူနဲ့ကြှနျမသိပျမခငျဘူး။ စကားတောငျမပွောဖူးဘူး။ အပွငျမှာတှတေ့ော့လညျးအဲတိုငျးပါပဲ။ သူကစကားသိပျ မပွောပါဘူး။ ကြှနျမလညျး တခွားသူငယျခငျြးတှနေဲ့စနောကျနတောနဲ့ သတိတောငျမထားမိပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ သူက အဲဒီကတညျးက ကြှနျမကိုသဘောကသြှားပုံရတယျ။ နောကျရကျတှကေတြော့ စကားလာလာပွောတယျ။ သိပျတောငျမကွာလိုကျပါဘူး။ ရညျးစားစကားပွောတော့တာပဲ။ အမှနျတိုငျးပွောရရငျ သူကကြှနျမကွိုကျတဲ့ပုံစံမြိုး မဟုတျပါဘူး။ ဒါက ရုပျရညျပိုငျးကိုပွောတာ။
စိတျဓာတျပိုငျးကတြော့လညျး ခုမှစသိတဲ့သူဆိုတော့ ကောငျးတယျ ဆိုးတယျ မခှဲခွားနိုငျသေးဘူးလေ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီတုနျးက ကြှနျမမှာပွသနာတဈခုတကျနတေယျ။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ ကြှနျမနဲ့အရမျးခငျတဲ့ ငယျသူငယျခငျြး ဖွဈတဲ့ ဇျောဇျောနဲ့ မထငျမှတျပဲရညျးစားတှဖွေဈသှားတာပါ။ ကြှနျမသူ့ကို မခဈြဖူး။ သူကကြှနျမကို ကွိုကျနတော ကွာလှပွီ။ ပွောရရငျ အလယျတနျးကတညျးကပါ။ ဇျောဇျောနဲ့ ကြှနျမက ငယျသူငယျခငျြးတှဆေိုတော့ ပွောမနာဆိုမနာ အတှငျးသိအစငျးသိတှေ ပွီးတော့အဲဒီတုနျးက စိတျကလညျး တအားညဈနတေဲ့အခြိနျ….အရကျသောကျခငျြတယျဆိုပွီး သူ့ကိုချေါသောကျရငျးဖွဈကုနျတာ။
မူးလာတော့ သူက ဖှငျ့ပွောပွီး ကြှနျမကလညျး……..အမှနျတိုငျးပွောရရငျ သိပျတောငျမမှတျမိတော့ဘူး။ ဘာတှပွေောခဲ့မိလညျးဆိုတာ…အဖွပေေးမိလား မပေးမိလားလညျးမမှတျမိဘူး။ သူကအတငျးဖကျပွီးကဈဆငျတှဆှေဲတာတော့ မှတျမိတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူကအဲ့လောကျနဲ့ရပျပွီး ကြှနျမကိုအိမျပွနျပို့ပေးပါတယျ။ နောကျနကေ့တြော့ ဘာဖွဈမှနျးတောငျကြှနျမမမှတျမိဘူး။ ဇျောဇျောကတော့ ကြှနျမကိုသူ့ရညျးစားအဖွဈ ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျကွီးမှတျယူလိုကျတယျ။ အဲဒီမှာပြားတုပျတော့တာပဲ။ ကြှနျမ တကယျဆိုးပါတယျ။ ကြှနျမစိတျတှကေအရမျးကိုလလှေငျ့ နခြေိနျမှာ အရကျကိုဖိသောကျတယျ။
သောကျတော့ ဇျောဇျောနဲ့ခုလိုတှေ မှားကုနျတယျ။ အရငျက ဖွူစငျခဲ့တဲ့သူငယျခငျြးသံယောဇဉျလေးက အဲဒီတဈရကျနဲ့တငျ ရစေုနျမြောတော့တာပါပဲ။ ဇျောဇျော တဈယောကျကတော့ အရမျးကိုပြျောပွီး သူ့အလုပျကသူတှနေဲ့တောငျကြှနျမကို မိတျဆကျပေးလိုကျသေးတယျ။ အမှနျအတိုငျးပွောရရငျကြှနျမက အရမျးခဈြခဲ့တဲ့ခဈြသူတဈယောကျရဲ့ ရကျရကျစကျစကျတဖကျသတျလမျးခှဲခွငျးကို ခံရပွီးတဲ့နောကျမှာ ဘယျယောကျြားရဲ့အခဈြကိုမှအယုံအကွညျမရှိတော့တဲ့ ကောငျမလေးတဈယောကျပါ။ အီစီကလီတှလြှေောကျထားရငျး စိတျပြျောအောငျနနေပေမေဲ့ ရိုးသားတဲ့သူငယျခငျြးသံယောဇဉျကို အရောငျဆိုးမိတဲ့အထိ ဖွဈသှားလိမျ့မယျလို့မမြှျောလငျ့ခဲ့မိဘူး။
အခုတော့စိတျထဲကမပါဘဲ ရညျးစားတဈယောကျရ…..ဖွတျဖို့ကလညျးခကျြခငျြးကွီးမပွောရဲတော့ မြောပွီးတှဲနရေတယျ။ သူရောကြှနျမရော အလုပျတှရှေိတော့ ညနအေလုပျဆငျးခြိနျလောကျပဲတှရေ့တာပါ။ အိမျတူတူပွနျတော့ Taxi ပျေါမှာ ဒငျးက ပါးစပျသရမျးလိုကျ လကျသရမျးလိုကျလုပျသေးတယျ။ လူလဈရငျလဈသလို ခိုးနမျးတယျ။ ရငျသားတှကေိုလညျးအတငျးကိုငျပွီးဖွဈညှဈတယျ။ ကြှနျမကအဲလိုအကငျြ့ တှကေိုမကွိုကျဖူးရှငျ့။ ကိုယျခဈြတဲ့သူနဲ့ဆိပျကှယျရာမှာသာ လှတျလှတျလပျလပျနရေငျနဖွေဈမယျ။ ဒီလို လူတှမွေငျနိုငျတဲ့ Taxi ပျေါကွီးမှာ သောငျးကနျြးတာမြိုးတော့လုံးဝမကွိုကျဖူး။ အဲဒီလိုမြိုးမလုပျဖို့ မကျြနှာထားတငျးတငျးနဲ့ဇျောဇေျာ့ကိုပွောရတယျ။
သူကတော့ကြားခြောငျးသလိုခြောငျးတယျဆိုတာ ဒါမြိုးဖွဈမယျထငျတယျ။ နောကျတခါရုံးပိတျရကျကတြော့ အပွငျထှကျဖို့ချေါတယျ။ ကြှနျမတို့ရုပျရှငျသှားကွညျ့ကွတယျ။ သူကအတှဲခုံဝယျမယျပွောပမေဲ့ ကြှနျမက မကျြစိအားမကောငျးလို့အတှဲခုံဆိုရငျပိတျကားနဲ့ဝေးပွီး ကွညျ့ရတာအားမရဘူးလို့ ဉာဏျဆငျပွီး ရှခေုံ့တှပေဲ ဝယျလိုကျတယျ။ ဒါတောငျမှ သိပျအလှတျမပေးခငျြပါဘူး။ ရုပျရှငျပိတျကားက အမှောငျခနျးတှပွေတဲ့အခါ ကြှနျမမကျြနှာကိုဆှဲလှညျ့ပွီး အနမျးတှပေေးတော့တယျ။ဇျောဇျောကလူကသာပိနျတာရယျ…သူ့အနမျးတှကေအား အရမျးပါတယျ။ နှုတျခမျးခငျြးစုပျရုံတငျမကဘူး လြှာကိုပါကြှနျမပါးစပျထဲထိုးထညျ့ပွီးလှညျ့ပတျနတေယျ။
သူ့လကျခြောငျးမာကဈြကဈြတှကေလညျး ကြှနျမရဲ့အိဖွိုးနတေဲ့ရငျသားတှကေို အတငျးဆုပျကိုငျလာတယျ။ ကြှနျမဝတျထားတာလညျပငျးပေါကျနဲနဲကယျြတဲ့တီရှပျဆိုတော့ လညျပငျးပေါကျထဲကနလေကျတှကေိုထိုးထညျ့ပွီး ဝတျထားတဲ့ဘရာကွားက ရငျသားကို အမိအရစမျးပွီးဆုပျနယျနတေယျ။ နို့သီးခေါငျးလေးကိုစမျးမိသှားပွီး အတငျးပှတျခနြေလေို့ ကြှနျမမှာအသံထှကျတော့မလိုဖွဈပွီး အံကိုကွိတျထားရတယျ။ ဘေးမှာလူတှနေဲ့လေ။ နောကျတော့သူ့လကျတှကေ ကြှနျမဝတျထားတဲ့ဂငျြးဘောငျးဘီဇဈကိုဖွုတျပွီး အတှငျးထဲထိ ထပျကြူးကြျောလာတယျ။ မိနျးကလေးတှရေဲ့ အားနညျးခကျြဖွဈတဲ့ ရငျသားတှကေိုအမိအရအကိုငျခံထားရတဲ့ကြှနျမက သူ့လုပျရပျတှကေိုမငွငျးနိုငျတော့ပါဘူး။ သူ့လကျနဲ့မထိခငျမှာပဲ ကြှနျမပိပိလေးထဲက အရညျတှစေိုသလိုလိုဖွဈလာတယျ။
သူလုပျနတောတှကေို ပါးစပျကဘာမှမပွောပမေဲ့ကြှနျမလကျကိုငျအိတျလေးကိုသူ့လကျဝငျနတေဲဘောငျးဘီပျေါတငျပွီးဖုံးပေးလိုကျတယျ။ဘေးကလူတှေ မမွငျအောငျလေ။ သူ့လကျတှကေ ကြှနျမအတှငျးသားတှနေဲ့ထိနပေါပွီ။ အပျေါကနေ ကိုငျပွီးပှတျနရေငျးနဲ့ လကျတဈခြောငျးကိုကြှနျမပိပိလေးထဲထိုးထညျ့လိုကျတယျ။ အရညျတှလေညျး စိမျ့နတေော့ ဇှပျကနဲဝငျသှားတာပေါ့။ ကြှနျမအသံမထှကျရဲဘဲ သူ့ပခုံးနဲ့ကိုယျ့ပါးစပျကိုထိပွီးပိတျထားရတယျ။ ညညျးမိမှာစိုးလို့။ ရုပျရှငျကဘာတှပွေနမှေနျးတောငျမသိလိုကျပါဘူး။ ကြှနျမအာရုံတှကေသူ့လကျတှပေျေါပဲ ရောကျနတောလေ။
အလုပျမြားနတေဲ့သူ့လကျတှကေို ကြှနျမလကျနဲ့လှမျးကိုငျပွီးရပျခိုငျးလိုကျတယျ။ သူ့ပစ်စညျးကဘယျလိုနတေယျ မသိဘူး။ လကျခလယျကတော့အတျောရှညျသား။ သူထုတျလိုကျသှငျးလိုကျလုပျနတောခံနရေငျး လုပျပါမြားတော့ ကြှနျမအထဲက နာလာတယျ။ ကိုယျ့ကိုကိုယျပီးလားမပီးလားတော့မသိဘူး။ အရညျတှကေတော့ တျောတျောလေး ထှကျနပေါတယျ။ ရုပျရှငျပွီးမှဘဲ Toilet ဝငျပွီး သနျ့ရှငျးရေးလုပျလိုကျတယျ။ ရုပျရှငျကွညျ့ပွီးပွနျထှကျလာကွတော့သူကဟိုဝငျခငျြသလို ဒီဝငျခငျြသလို လုပျသေးတယျ။ ကြှနျမကလညျး ဘာလိုလိုညာလိုလိုနဲ့ငွငျးပွီး မုနျ့လေးဘာလေးစားပွီး ပွနျလာကွတယျ။ကြှနျမ ဇျောဇေျာ့ကိုမခဈြဘဲ ဘာလို့တှဲရလဲဆိုရငျ အားနာလို့ပါ။ ဟုတျပါတယျ အားနာလို့ခါးပါပါနရေပွီလေ။
သူက ကြှနျမအနှံတာတှအေရမျးခံခဲ့တယျ။ ကြှနျမအပျေါအရမျးဂရုစိုကျခဲ့ပါတယျ။ အဲလိုလူမြိုးကို ငါနငျ့ကိုမခဈြပါဘူး အရကျမူးပွီး လကျခံလိုကျမိတာပါ လို့ ကြှနျမဘယျလိုပွောထှကျပါ့မလဲ။ အဲဒါကွောငျ့ သူစိတျကနြေပျအောငျခဏတဈဖွုတျတှဲတာပါ။ ဒါပမေဲ့ အခြိနျမလှနျခငျ သူ့ကိုအညငျသာဆုံးနညျးနဲ့ ဖွတျဖို့ ကြှနျမစဉျးစားထားပွီးသားပါ။ အဲဒီအခြိနျမှာ ကိုကိုက ပျေါလာခဲ့တာ။ တှဖေူ့းတာမှ နှဈရကျတပိုငျးရှိသေးတာကို အတငျးကွီး ဖုနျးတှဆေကျ အဖွတှေတေောငျး လုပျတော့တာပဲ။ ဇျောဇျောကလညျး တနထေ့ကျတနေ့ ရောဂါတှရေငျ့နပွေီလေ။ ဟိုသှားရအောငျ ဒီသှားရအောငျချေါနပွေီ။
ကြှနျမကငွငျးထားတော့သူလညျး ညဈပွီး ကြှနျမကို မဆကျသှယျပဲ ဂိမျးပဲသှားသှားဆော့နတေယျ။ကြှနျမလညျး အဲဒါကိုအကွောငျးပွပွီး နငျကငါ့ကိုဂရုမစိုကျဘူးဘာညာနဲ့ သူ့ကို စိတျကောကျပျလိုကျတယျ။ ပွီးတော့တဈခါတညျးကိုကို့ကို အဖွပေေးလိုကျတော့တာပဲ။ ကိုကို့ကိုအဖွပေေးပွီးတော့မှ ငါ့မှာ ခဈြသူရှိနပွေီ….လမျးခှဲကွရအောငျဆိုပွီး ဇျောဇေျာ့ကို ပွောလိုကျတယျ။ ဖွဈခငျြတော့ သူကလညျး အဲဒီ့အခြိနျ အလုပျနဲ့ ခရီးထှကျသှားရတယျ။ အဲဒီတော့ ကြှနျမကိုလာတှပွေီ့း ပှားလို့မရတော့ဘူးလေ။ သူပွနျရောကျတော့ ကြှနျမကိုတှဖေို့ကွိုးစားသေးပမေဲ့ ဒီတဈခါတော့ ကြှနျမဲ ငွငျးလိုကျပါတယျ။
သူလညျးဆကျမကွိုးစားတော့ဘူး။ နဲနဲတော့ထူးဆနျးတယျနျော။ ကိုယျ့ကို ငယျငယျလေးထဲက သိပျခဈြခဲ့ပါတယျဆိုတဲ့ လူတဈယောကျကို ဖွတျရတာ အဲလောကျလှယျမယျတောငျ ကြှနျမထငျမထားဘူး။ ကှယျရာမှာအသဲကှဲနလေားမသိပမေဲ့ ဇျောဇျောက ဖုနျးဆကျတာတှေ ကြှနျမအိမျနဲ့အလုပျကိုလညျးသိနရေဲ့သားနဲ့တှဖေို့ကွိုးစားတာတှေ မလုပျပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ကြှနျမလညျး ယောကျြားတှရေဲ့ အရမျးခဈြပါတယျဆိုတဲ့အခဈြကို ပိုပွီးအယုံအကွညျမဲ့လာတယျ။ ဒီအခြိနျမှာပဲ ကိုကိုနဲ့ကြှနျမ တဈယောကျအကွောငျးတဈယောကျသိပျတောငျမသိသေးခငျ ရညျးစားတှဖွေဈလာတယျ။
ခဈြသူတှဆေိုပမေဲ့ ကိုကိုကနယျကမို့ တဈလတဈခါ နှဈခါလောကျပဲတှဖွေ့ဈကွပါတယျ။ ကြှနျမကလညျး အဲဒါကိုသဘောကပြါတယျ။ ခါတိုငျးလိုပဲ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ တှလေို့ကျ လြှောကျသှားလိုကျ လြှောကျစားလိုကျ လုပျလို့ရတယျလေ။ ကိုကိုပါရငျစိတျက နဲနဲကဉျြးကပျြတယျ။ ကြှနျမက ယောကျြားလေးသူငယျခငျြးမြားတယျ။ ကိုကို့ကိုပါချေါပွီး သူတို့နဲ့တှတေဲ့အခြိနျ သူတို့က စလိုကျနောကျလိုကျရငျ ကွညျ့တဲ့ကိုကို့မကျြလုံး၊ ဖွဈသှားတဲ့ကိုကို့မကျြနှာကို သူတို့ သိလားမသိလား မသိပမေဲ့ ကြှနျမအားနာမိတယျ။
ရညျးစားဖွဈပွီး နှဈလလောကျနတေော့ ကိုကိုက ဘီယာသှားသောကျရအောငျဆိုပွီးချေါပါတယျ။ ဟိုတယျတဈခုကိုရောကျသှားတယျ။ တကယျတော့ ကြှနျမက အပွငျးတှပေါခတြတျနပွေီဆိုတာ သူမသိဘိူး။ အဲဒီ့မှာ စားရငျးသောကျရငျးနဲ့ သူက ကြှနျမကိုဖကျပွီး ခုတငျပျေါချေါသှားတယျ။ အဝတျတှဟေိုခြှတျဒီခြှတျနဲ့ အကုနျလညျးကုနျရော စောငျကွီးခွုံပွီး ဘာဂြာပေးတော့တာပဲ။ ကြှနျမလညျး ဘီယာအရှိနျတှနေဲ့ဆိုတော့ ရငျခုနျသံတှတေဒိနျးဒိနျးနဲ့ပေါ့။ ဂြာလို့အားရတော့မှ စောငျခွုံထဲက ခြှေးတှသေီးနတေဲ့သူ့မကျြနှာထှကျလာပွီး သူ့ကိုယျပျေါကအောကျခံဘောငျးဘီကိုဆှဲခြှတျလိုကျတယျ။ သူ့ပစ်စညျးက တျောတျောကွီးပါတယျ။ ကြှနျမစိတျထငျခုနဈလကျမကြျောကြျောတော့ရှိမယျထငျတယျ။ လုံးပတျကလညျးခပျထှားထှားပဲ။
ကိုကို့မတိုငျခငျတှခေဲ့တဲ့ ဘဲတှရေဲ့ ပစ်စညျးတှကေ စံမမှီတနျးမမှီလို့တောငျပွောလို့ရတယျ။ ဇျောဇေျာ့ပစ်စညျးကိုတော့ကြှနျမ မတှဖေူ့းလိုကျဘူး။ တှဖေူ့းဖို့နနေသောသာ လကျနဲ့တောငျ မစမျးဖူးပါဘူး။ ဆကျပွောရရငျကိုကိုကသူ့ပစ်စညျးကိုထုတျပွီးတာနဲ့ ကြှနျမကို စပွီးမိတျဆကျပေးတော့တာပဲ။ “ကိုကို သှငျးလိုကျတော့မယျနျော ခဈြ” ကြှနျမရီဝဝေနဲ့ ကိုကို့မကျြနှာကိုမော့ကွညျ့လိုကျတယျ။ ဒီအခွနေရေောကျမှ မသှငျးနဲ့ပွောလို့လညျး နားထောငျမှာမှမဟုတျတော့ပဲ။ ခေါငျးကိုပဲငွိမျ့ပွလိုကျတယျ။ တောငျ့တငျးသနျမာနတေဲ့သူ့ပစ်စညျးကွီးက ကြှနျမကိုယျထဲကို တဈရဈခငျြးတိုးဝငျလာတယျ။
ကိုကိုနဲ့မတှခေ့ငျရှမှေ့ာ ရညျးစားနှဈယောကျလောကျထားဖူးခဲ့တယျဆိုပမေဲ့ ကိုကိုနဲ့ဒီနပေ့ထမဆုံး အတှအေ့ကွုံဆိုတော့ ကြှနျမရှကျပွီးမကျြစိတှမှေိတျထားမိတယျ။ “ခဈြ….ခဈြပွီးတော့မလား ကိုကိုပွီးလိုကျတော့မယျနျော” “အငျး..အငျး” ကြှနျမညညျးရငျးညူရငျးပဲပွနျဖွလေိုကျတယျ။ ကြှနျမ ရညျးစားတှလေညျးထားဖူးခဲ့ပွီး ခုလိုလညျး အတူနခေဲ့ဖူးပွီးမှ မိနျးကလေးတဈယောကျအနနေဲ့ ပွီးတယျဆိုတာကို မခံစားဖူးသေးဘူးဆိုရငျ ယုံကွပါ့မလားနျော။ တကယျပါ။လိငျဆကျဆံခြိနျမှာ စိတျကနြေပျမှုရရငျပွီးတာပဲ ပွီးတယျမပွီးဘူးဆိုတာဘာအရေးလဲလို့ပဲ ကြှနျမသဘောထားခဲ့ပါတယျ။ အခုလညျး ကိုကိုမေးတဲ့ ပွီးတော့မလားဆိုတာကို အငျးလို့ပွနျဖွတောမဟုတျပါဘူး။
သူ့ကိုမွနျမွနျပွီးခိုငျးလိုကျတာပါ။ အခြိနျကွာတော့ကြှနျမအတှငျးသားတှကေ စပျသလိုကြိနျးသလိုလိုဖွဈလာပွီလေ။ ကိုကိုက မွနျမွနျသှကျသှကျကွီး ၁၀ကွိမျကြျောကြျောလောကျ ဆောငျ့ပွီးတာနဲ့ ကြှနျမကိုယျထဲကို သုတျရတှေပေနျးထုတျလိုကျပါတော့တယျ။ ကိုကိုက ကြှနျမကိုစိတျကနြေပျမှုပေးနိုငျခဲ့တယျဆိုတာ မငွငျးပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ကြှနျမသူ့ကိုမခဈြခဲ့ဘူး။ သူ့အခဈြကိုပဲသာယာခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုနျးကတော့ သူ့ကိုခဈြသလိုလိုရှိပမေဲ့ ခုခြိနျပွနျစဉျးစားလိုကျရငျ သူ့ကိုမခဈြခဲ့ဘူးဆိုတာ ပိုပိုသိလာပါတယျ။ခဈြသူတှဖွေဈလာပွီးမှ ကိုကို့အကွောငျးကို တဖွေးဖွေးသိလာရတာဆိုတော့ လိငျဆကျဆံခြိနျမှာသူပေးတဲ့ သာယာမှုကလှဲရငျ ကနျြတဲ့အခြိနျတှမှောသူ့ကို ကြှနျမမကွိုကျတဲ့ အခကျြတှေ တျောတျောမြားမြားရှိပါတယျ။
ကိုကိုနဲ့ကြှနျမက ရှဈနှဈကိုးနှဈနီးပါး အသကျကှာနလေို့လားတော့မသိဘူး။ကိုကို့ရဲ့ ပစိပစပျမြားတာ၊ ဇီဇာကွောငျတာ၊ သဝနျတိုတာ၊ ခြုပျခယျြတာ အဲဒီ့စိတျတှကေ သာမနျလူတှထေကျပိုသလိုပဲလို့ကြှနျမခံစားရတယျ။ ကိုယျခဈြတဲ့သူကိုသဝနျတိုတာလောကျတော့ ကြှနျမနားလညျပေးနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျမရဲ့ ယောကျြားလေး သူငယျခငျြးမှနျသမြှကို သံသယစိတျနဲ့ကွညျ့ပွီး နောကျကှယျကရြငျ ဘယျကောငျကဘယျလိုမကောငျးတာ ဆိုပွီး ပွောတာကတြော့ ကြှနျမသူငယျခငျြးတှဘေကျက မခံနိုငျသလို ကြှနျမအပျေါလညျး မယုံကွညျရာရောကျတယျ မဟုတျလား။ ကြှနျမကလညျး သူအဲ့လိုလုပျလေ ပိုအရှဲ့တိုကျခငျြလဆေိုတော့ သူနဲ့ကွိုကျနတေုနျးမှာပဲ နောကျထပျဇာတျလမျးတဈခုပျေါလာတော့တာပဲ။
“စပယျမ….နငျ့တိုကျခနျးရှရေ့ောကျပွီ ဆငျးလေ……” ကြှနျမသူငယျခငျြးလှမျးပွောလိုကျတဲ့အသံကွားမှ ကြှနျမလညျးအတှေးဆကျပွတျသှားတော့တယျ။ သူငယျခငျြးနဲ့ ကိုလတျဇငျတို့ နှဈယောကျကို နှုတျဆကျပွီး ကြှနျမနတေဲ့တိုကျခနျးပျေါတကျလာခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျမဇာတိက ပဲခူးမှာမို့ ရနျကုနျမှာ မိဖွူနဲ့ လှငျမာဆိုတဲ့ သူငယျခငျြးနှဈယောကျနဲ့တိုကျခနျးစုငှားပွီးနပေါတယျ။ ကြှနျမအခနျးထဲရောကျတော့ သူတို့နှဈယောကျလညျးပွနျရောကျနကွေပွီ။ ကြှနျမကိုမွငျတာနဲ့ မိဖွူက ပွုံးစိစိနဲ့…. “ဟဲ့ စပယျ…ငါဒီနပွေ့နျလာတော့ ငါတို့တိုကျအောကျမှာ ဘယျသူနဲ့တှတေ့ယျမှတျလဲ” ကြှနျမလညျးရခြိုးဖို့အဝတျတှခြှေတျနရေငျးစပျဖွဲဖွဲနဲ့ပွနျမေးလိုကျတယျ။ “ဘယျသူလဲ နငျ့ကိုကွိုကျနတေဲ့နငျတို့အလုပျထဲကကုလားကွီးလား ဟိဟိ”
“ကောငျမ…အကောငျးပွောမလို့ဟာကိုနျော……. အရငျတဈပတျကငါတို့ကလပျသှားတော့ နငျနဲ့တှဲကတဲ့ ကောငျလေးလေ အပွနျငါတို့ကိုတောငျကားနဲ့လိုကျပို့ပေးသေးတယျလေ ငါနာမညျမနေ့တေယျ ဘဲသှေးဆိုလား ဟီးဟီးး” “ရဲသှေးပါဟဲ့ ..သူကဘာလာလုပျတာတဲ့လဲ” “နငျ့ကိုလာရှာတာပေါ့ ကောငျမရယျ……..ဖုနျးမကိုငျလို့တဲ့…………ငါလညျး နငျ့အလုပျကအခြိနျပိုဆငျးရတယျ ဘာညာနဲ့ ပွောလိုကျတယျ…သူကနငျ့အလုပျကဘယျမှာလညျးမေးနသေေးတယျ…ငါက မေးခငျြရငျတိုကျရိုကျမေးပါ လို့..ငါကွားထဲကနေ နငျကွိုကျမှနျးမသိ မကွိုကျမှနျးမသိမပွောခငျြဘူးလို့ ပွောပေးလိုကျတယျ…။
အဲတော့မှ သူလညျးလမျးကွုံလို့ဝငျကွညျ့တာပါတဲ့ ပွောပွီးလဈသှားတာပဲ စပယျတို့မြားစှံခကျြနျော…ကိုကိုဇျောမငျးအောငျကွီး တဈယောကျလုံးရှိနတောတောငျ တနျးလနျးတနျးလနျးတှကေ မြားခကျြပဲ ဟိဟိ” “အေး ခြောတဲ့လှတဲ့သူတှဆေိုတော့ ဒီလိုပဲပေါ့ဟာ”ကြှနျမမိဖွူကိုလြှာထုတျပွလိုကျရငျးရခြေိုးခနျးထဲဝငျလာလိုကျတယျ။ရခြေိုးနရေငျးရဲသှေးအကွောငျးကို စဉျးစားမိသေးတယျ။ ကောငျလေးက ၁၈ ၁၉နှဈလောကျပဲရှိအုံးမယျ။ တက်ကသိုလျတကျနတေုနျးတဲ့။ စတိုငျကခပျမိုကျမိုကျလေး။ မကျြနှာကလညျး ကိုးရီးယားမငျးသားတှလေို နုနုဖတျဖတျနဲ့။ ကြှနျမကဒီလိုပုံစံမြိုးမကွိုကျတတျပါဘူး။ပုံစံကသနျ့သနျ့ပွနျ့ပွနျ့မို့ ကလပျထဲမှာ ကနရေငျး အတငျးကွီးလာရောတော့လညျး ရလေိုကျငါးလိုကျပွနျဆကျဆံလိုကျတာပါ။
အပွနျကိုလိုကျပို့ရငျး ကြှနျမတို့ သုံးယောကျဖုနျးနံပါတျတှတေောငျးသှားသေးတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူဖုနျးဆကျတာက ကြှနျမတဈယောကျထဲကို……..။ ရဲသှေးတဈယောကျကြှနျမကိုနရေ့ောညရောဖုနျးဆကျပွီးကြူနတောကို ကြှနျမသူငယျခငျြးတှကေို အသိမပေးဘဲထားခဲ့တယျ။ ညဘကျကိုကိုနဲ့ဖုနျးပွောပွီးတာနဲ့သူ့ဖုနျးကတနျးဝငျလာတော့ဆိုတော့ သူငယျခငျြးတှလေညျးမရိပျမိကွဘူးလေ။ သူတို့ကလညျး သူတို့ဘဲတှနေဲ့ဖုနျးပွောနရေတာနဲ့ အာရုံတောငျစိုကျမိမှာမဟုတျပါဘူး။ ရခြေိုးပွီးတာနဲ့ ကိုကို့ဖုနျးကတနျးဝငျလာလို့ပွေးကိုငျရတယျ။ မကိုငျမိဘဲ missed call မြားဖွဈနရေငျရဈလို့ဆုံးမှာမဟုတျတော့ဘူးလေ။
အခုတောငျ သူငယျခငျြးတှနေဲ့တှမေ့ယျပွောထားရကျနဲ့ အိမျပွနျနောကျကတြယျဆိုပွီး ရဈနတောမပွီးတော့ဘူး။ နားနှဈဖကျလုံးထူပူနအေောငျနားထောငျပွီးတော့မှ ခါတိုငျးလိုပဲ အရမျးခဈြလှနျးလို့ပါ ခဈြရယျနဲ့ အဆုံးသတျပွီးဖုနျးခသြှားတယျ။ ဟူး……ဒီဘဲကွီးကိုမွနျမွနျဖွတျလိုကျရငျကောငျးမယျ ထငျတယျလို့စိတျပေါကျပေါကျနဲ့တှေးမိတယျ။ “ဟဲ့ စပယျ နငျ့ကိုကိုနဲ့ပွတျသှားကွပွီဆို…. ” ရုံးမှာအလုပျလုပျနရေငျး Gtalk ကလှမျးမေးလိုကျတဲ့ ကိုလတျဇငျကွောငျ့ လုပျလကျစအလုပျခဏထားပွီး ပွနျဖွလေိုကျတယျ။“ဟုတျတယျ ကိုကွီး…စပယျတို့ပွတျသှားပွီ” “အမျ…ဘယျလိုဖွဈကွတာတုနျးဟာ….နငျတို့ကလညျး…” “ဒီလိုပဲလေ..တဈပူငွိမျးတာပေါ့ အဟီး…. ”
“အှနျ…..ငါကတော့နငျအသဲတှကှေဲပွီး ဝမျးနညျးနမေလားလို့…အရကျသောကျကွမလားလို့အဖျောစပျမလို့…. ဟီးဟီး နငျကဘာမှမဖွဈဘူးဆိုတော့ ထားပါတော့ ” “အမယျလေး…သောကျခငျြရငျသောကျပေါ့…..စပယျတို့က သူမြားလိုအသဲကှဲတယျဆိုပွီးအကွောငျးပွခကျြနဲ့ သောကျတာ မှုတျဖူး…ကွိုကျလို့သောကျတာ ဟိဟိ ” “ အေးအေး..အာ့ဆိုလညျး ဒီတပတျစနအေားလား..တှကွေ့မယျ တဈခွားသူတှလေညျးချေါထားလိုကျမယျ” “စနမေအားဝူး….. တနင်ျဂနှလေုပျလိုကျနျော” “အေးပွီးရော…အသဲကှဲတဲ့အထိမျးအမှတျနဲ့နငျတိုကျဖို့ပွငျထား ” “မကှဲပါဝူးဆိုနမှေ ” Computer screen ပျေါမှာ smiley အရုပျလေးတှေ ရီပွလိုကျ လြှာထုတျပွလိုကျ စိတျဆိုးပွလိုကျနဲ့ အလုပျမြားနကွေတာကို အဓိပါယျမဲ့ငေး ကွညျ့ရငျး ကိုကိုနဲ့ပွတျသှားရတဲ့အကွောငျးအရငျးက ကြှနျမခေါငျးထဲပျေါလာတယျ။
ပွောရရငျကိုကိုနဲ့ကြှနျမပွတျသှားတာ ရဲသှေးကွောငျ့ပါ။ ကိုကိုနဲ့ညတိုငျးဖုနျးပွော ပွီးတာနဲ့ ရဲသှေးကကြှနျမဆီဖုနျးဆကျတယျ။ ဘယျအခြိနျလောကျဆကျလို့ကြှနျမပွောထားလို့ပါ။ တဈညကတြော့ ရဲသှေးနဲ့ပွောနတေုနျးကိုကိုက ပွောစရာကနျြသေးလို့ ထပျဆကျတော့ဖုနျးကမအားဘူး။ သူငယျခငျြးတှဆေီဆကျတော့လညျး မိဖွူက အပွငျရောကျနတေယျ။ လှငျမာက သူ့ဘဲနဲ့ပွောနလေို့ ဖုနျးမအားဘူး။အဲဒီ့မှာကိုကိုကကြှနျမကိုမင်ျသကာဖွဈသှားတယျနဲ့တူတယျ။ နောကျနေ့ မပွောမဆိုနဲ့ ရနျကုနျရောကျခလြာပွီး ကြှနျမ တို့တိုကျရှမှေ့ာ ခြောငျးနတော။ ဖွဈခငျြတော့ အဲဒီနကေ့ ရဲသှေးကရုံးလာကွိုပွီး ပွနျလိုကျပို့ပေးတာနဲ့ တညျ့တညျ့တိုးတိုးတယျ။ ရဲသှေးပွနျသှားတာနဲ့ ကြှနျမဆီလာပွီး မြိုးစုံစှပျစှဲတော့တာပဲ။
အဲဒီအခြိနျမှာရဲသှေးနဲ့ကြှနျမအီစီကလီဆိုပမေဲ့ ဘာမှဖွဈကွသေးတာတော့မဟုတျဘူး။ သူက အျောကွီးဟဈကယျြမဟုတျပမေဲ့ ဒေါသသံနဲ့ ပွောနတေော့ အသံတှကေကယျြလာပွီး လမျးသှားလမျးလာတှနေဲ့ အနီးအနားလူတှကေလညျးကွညျ့နကွေတာ။ကြှနျမလညျးရှကျလာတယျ။ သူ့ကိုလညျးစိတျကုနျလာပွီး ဘာမှရှငျးပွမနခေငျြတော့တာနဲ့ “ဟုတျတယျ… ရှငျစှပျစှဲတာတှအေားလုံးမှနျတယျ ကနြေပျပွီလား” လို့ပွောခပြလိုကျတယျ။ သူက သူမြှျောလငျ့ထားပုံမရတဲ့ စကားကို ကွားလိုကျရသလိုမြိုး တအံ့တသွဖွဈပွီး ခဏငွိမျသှားတယျ။
နောကျတော့ တောကျ တဈခကျြခေါကျပွီး ဘာမှမပွောတော့ပဲ လှညျ့ထှကျသှားတော့တာပဲ။ အဲဒီမှာတငျ ကိုကိုလို့ကြှနျမချေါခဲ့တဲ့ ကိုဇျောမငျးအောငျနဲ့ ဇာတျလမျး တဈခနျးရပျသှားပါတော့တယျ။ “မ..သောကျလေ သိပျလညျးမသောကျသလိုပဲ…ဘာထပျမှာပေးရမလဲ” ပွုံးပွုံးလေးမေးနတေဲ့ ရဲသှေးကို ကြှနျမခေါငျးရမျးပွပွီး ရှကေ့ဘီယာခှကျကိုလှမျးကိုငျလိုကျတယျ။ ဒီကောငျလေးက အပွုံးတော့ခြိုသား။ သောကျရငျးစားရငျး စကားပွောရငျးနဲ့ပဲ ကြှနျမအရှိနျမလှနျအောငျ သတိထားနတေဲ့ကွားက ခေါငျးထဲမှာတျောတျော မူးလာတယျ။
အနျခငျြသလိုလိုလညျးဖွဈလာတာနဲ့ Toilet ထဲဝငျပွီး လုပျစရာရှိတာတှလေုပျ (အနျတာတို့ ရှူရှူးပေါကျတာတို့ပွောတာ) ပွနျထှကျလာတော့ သူက တံခါးဝမှာရပျစောငျ့နပွေီး “မ မူးနပွေီးမလား..သှားကွမယျ ကြှနျတျောပွနျလိုကျပို့မယျ” အဲလိုပွောပွီး ကြှနျမကိုချေါသှားတာ ဟိုတယျတဈခုကိုပါ။ အခနျးထဲရောကျတော့တံခါးပိတျပွီးရုံရှိသေး ကြှနျမကိုနံရံမှာ ဆှဲကပျ…သူကထိုငျခငျြလိုကျပွီးကြှနျမဝတျထားတဲ့ဂါဝနျအတိုလေးအောကျကို သူ့ခေါငျးထိုးထညျ့လိုကျတယျ။ ကြှနျမလညျး ဂါဝနျအုပျနတေဲ့သူ့ခေါငျးကိုကိုငျထားရငျး ငါဘာလို့ဒီကိုလိုကျလာမိပါလိမျ့..လို့ မူးမူးနဲ့ယောငျတောငျ ပေါငျတောငျဖွဈပွီးစဉျးစားနမေိတယျ။
သတိပွနျဝငျလာတော့ သူကကြှနျမဂါဝနျကိုဆှဲခြှတျပွီးနပွေီ။ သူနဲ့မကျြနှာခငျြးဆိုငျဖွဈနတေဲ့ကြှနျမကိုယျလုံးကို ဆှဲလှညျ့လိုကျပွီးနံရံကိုလကျထောကျခိုငျးလိုကျတယျ။ ပနျတီ ပနျးနုရောငျလေးကို ဆှဲခြှတျခလြိုကျရငျး ကြှနျမခွထေောကျတှကေို သူ့လကျနဲ့ တဈဖကျတဈခကျြဆီကိုငျပွီး ကားလိုကျတယျ။ သူ့ဘောငျးဘီကိုလညျးခြှတျလိုကျပွီး အနောကျကနသေူ့ပစ်စညျးနဲ့ ခွထေောကျကားထားလို့ နဲနဲဟနတေဲ့ ကြှနျမအကှဲကွောငျးလေးကို ပှတျပွီးဆှဲနပေါတယျ။ “ဟား……..ခဈြလိုကျတာမရယျ” သူ့ပစ်စညျးကိုထိုးထညျ့ရငျးပွောလိုကျတာကွောငျ့ ခဈြလိုကျတာလို့ပွောတာလား ကပျြလိုကျတာလို့ ပွောတာလား မသဲကှဲလိုကျဖူးရယျ။
တကယျလညျးသူ့ပစ်စညျးကကြှနျမကိုယျထဲမှာကပျြညပျနပေါတယျ။ နောကျကြောပေးထားတာ ကွောငျ့ ကြှနျမလှမျးမမွငျရသေးဘူး။ ထိနျးမရနိုငျတဲ့ စိတျဆန်ဒကွောငျ့ ကြှနျမခွထေောကျတှပေိုကားလာပွီး တငျကိုအနောကျပဈထားမိတယျ။ ဒီလိုပုံစံကယောကျြားလေးကအရပျအရမျးရှညျနရေငျအဆငျမပွတေတျဖူးမဟုတျလား။ သူကတော့ကြှနျမနဲ့အရပျမတိမျးမယိမျးမို့ အနောကျကနအေဲလိုထညျ့ရတာ အဆငျပွပေုံရတယျ။ ကြှနျမရဲ့ကွိုးသိုငျးဒေါကျဖိနပျကိုမခြှတျရသေးတာလညျးပါမှာပေါ့။ “အ..အားးး” ရဲသှေးရဲ့ဆောငျ့ခကျြတှပေိုပွီးမွနျလာသလို ကြှနျမရဲ့ညညျးသံတှကေလညျးပိုပိုကယျြလာတယျ။ တငျတှကေိုလညျးအနောကျပဈပွီး တနျပွနျဆောငျ့ပေးနမေိတယျ။
သူကတော့ ဘရာကြှတျသှားပွီးဖွဈတဲ့ ကြှနျမရငျသားနှဈဖကျကို ခပျတငျးတငျးဆုပျကိုငျခွမှေရငျး အမွနျဆုံးနှုနျးနဲ့ဆောငျ့ရငျး ခရီးဆုံးကိုရောကျအောငျ သှားနပေါတယျ။ နောကျဆုံးတော့ ကြှနျမတငျသားတှကေို လကျနှဈဖကျနဲ့အတငျးဆှဲကပျဖိညှဈရငျးက “ပွီးတော့မယျ ပွီးတော့မယျ မ…..အားးးအားးး” အသံမြိုးစုံအျောဟဈရငျး ကြှနျမနောကျကြောကိုမှီဖကျလိုကျတယျ။ အိပျယာပျေါလှဲအိပျရငျး အမောဖွနေကေတြော့မှ သူ့ပစ်စညျးကိုကြှနျမသသေခြောခြာကွညျ့မိတယျ။ အရှညျက သာမာနျလောကျပဲ ……လုံးပတျကတော့တျောတျောကိုကွီးပါတယျ။တိုတိုတုတျတုတျကွီးပေါ့။ ကြှနျမကွညျ့နတောကို သူတှသှေ့ားပွီး သူ့ပစ်စညျးကိုလကျနဲ့အုပျထားလိုကျတယျ။
“ဟိဟိ မကွညျ့ပါနဲ့ မရယျ…သားဟာလေးက တိုတိုလေး” “အယျ အဲလောကျလညျးမတိုပါဘူး…လုံးပတျကတျောတျောကွီးနတေယျနျော….. ဆေးတှဘောတှမြေားစားထားလား” “အာ..မစားပါဘူး မရယျ…ဒါအျောရီဂငျြနယျပါ အဟိ……….ဒါနဲ့… မမပူစီလေးကလေ အရမျးကပျြပွီးကောငျးတာပဲ သိလား” “အျော…ဒါကတော့ နငျ့ဟာကွီးက တျောတျောတုတျတာကိုး ရဲသှေးရဲ့…ကပျြမှာပေါ့” သူ့ကိုမကျြစောငျးထိုးရငျး ပွောလိုကျတော့ သူကခပျပွုံးပွုံးနဲ့ကြှနျမနှုတျခမျးတှကေို ဖိကပျပွီးနမျးလိုကျတယျ။ လူသာငယျပမေဲ့ သူအတှအေ့ကွုံအပွညျ့ရှိပုံရပါတယျ။ ဒီကိစ်စမတိုငျခငျက ကြှနျမတို့ညဘကျလြှောကျလညျကွရငျး ကားပျေါမှာ သူက ဟိုကိုငျဒီနှိုကျလုပျဖူးပွီးပွီ ဆိုတော့ သိပျရှကျမနကွေတော့ဘဲ ဒီလိုပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောဖွဈကွတာလေ။
အဲဒီ့နေ့ ဟိုတယျက မပွနျခငျ သူနဲ့ နှဈခါလောကျ ထပျဆှဲဖွဈကွပါသေးတယျ။ “စောငျ့မှာပေါ့မောငျရယျ…စိတျခပြါ” အလိုကျသငျ့စကားတှပွေောခဲ့ပမေဲ့ သူထှကျသှားကတညျးက ကြှနျမ internet က သူသိတဲ့ ရှိသမြှ အကောငျ့တှကေို မသုံးတော့ဘဲ အသဈလုပျလိုကျပွီး သူ့ကိုအဆကျအသှယျဖွတျလိုကျတာကွာပွီလေ။မသိတဲ့နိုငျငံခွား Ph call တှလေညျး black list သှငျးပလိုကျတာ။ ရညျးစားသကျတမျးလညျး ဘယျလောကျမှမရှိသေးတဲ့အခြိနျမှာ ဒီလိုနိုငျငံခွားထှကျသှားတဲ့ခဈြသူကိုစောငျ့နပွေီး သူက ဖွတျတာခံမဲ့အစား ကြှနျမကပဲစပွီးသံယောဇဉျဖွတျပဈလိုကျတယျ။ အတှအေ့ကွုံတှအေရ သူ့လိုကောငျလေးမြိုးတှေ ဘယျလိုအခြိုးခြိုးတတျတယျဆိုတာ ကြှနျမသိပွီးသား။ ကြှနျမခနျ့မှနျးတာ မမှားပါဘူး။
သိပျမကွာခငျပဲ ကြှနျမဆီကို ကောငျမလေးတဈယောကျဖုနျးဆကျပွီး သူက ရဲသှေးရဲ့ခဈြသူဖွဈတဲ့အကွောငျး…..ရဲသှေးကသစ်စာဖောကျပွီး နောကျတဈယောကျတှဲနတေယျကွားလို့ စုံစမျးနတော ခုမှပဲကြှနျဖုနျးနံပါတျကိုရတဲ့အကွောငျး…..သူတို့ခဈြသူ နှဈယောကျကို မနှောကျယှကျဖို့နဲ့ အခုနိုငျငံခွားထှကျသှားပွီးတော့ အှနျလိုငျးမှာတှတေ့ာတောငျ ရဲသှေးက သူ့ကိုအငျတငျတငျဆကျဆံနတေဲ့အကွောငျးတှလောပွောပါတော့တယျ။ ကြှနျမရီရီမောမောနဲ့ ဒီလိုလေးပဲ ပွနျပွောလိုကျပါတယျ။ “သူထှကျသှားကတညျးက အမသူ့ကိုအဆကျအသှယျဖွတျလိုကျတာလေ…မယုံရငျသူ့ကိုမေးကွညျ့လိုကျ ညီမလေး.. သူ့မှာရီးစားရှိနတော သိလို့တော့မဟုတျပါဘူး…အမဘာသာ ပငျြးလာလို့ သူ့ကိုလညျး မယုံလို့ ဖွတျလိုကျတာ…။
ညီမလေး စိတျမပူပါနဲ့ သူအမကိုလုံးဝဆကျသှယျလို့ရတော့မှာမဟုတျဖူး အမဖုနျးလညျး ပွောငျးတော့မှာ…… အမကလညျးသူ့ကိုအဆကျအသှယျမလုပျတော့ဘူးဆိုတော့ ညီမလေးပဲသူ့ကိုပွောပွလိုကျပါ….အခုညီမလေးအကွောငျး အမသိသှားပွီဆိုတော့ အမသူ့ကို မုနျးလိုကျပွီ ဆိုတဲ့အကွောငျးကိုပေါ့…… အမလညျးအကွောငျးပွခကျြရသှားတာပေါ့ ဟငျးဟငျး လနှဈလလောကျခွငွေိမျနခေဲ့တယျ။ရီးစားထားရတာလညျး ပငျြးလာသလိုလိုမို့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့လြှောကျသှားလိုကျ လညျလိုကျပတျလိုကျနဲ့ပဲ ပြျောပြျောနလေိုကျတယျ။ သူငယျခငျြးတှထေဲမှာ ကိုလတျဇငျလညျး ပါတာပေါ့။
သူ့အိမျက ကြှနျမနတေဲ့နရောနဲ့ နီးတော့ ခဏခဏဆိုသလို တှဖွေ့ဈကွပါတယျ။ တဈနရောရာသှားခငျြလို့ သူငယျခငျြးတဈယောကျမှ အဖျောစပျလို့မရရငျတောငျ သူ့ကို အမွဲချေါလို့ရတယျလေ။ သူကလညျး ကြှနျမချေါရငျ အလုပျတှအေသာထားခဲ့ပွီး ဘယျနရောမဆို လိုကျတာကိုး။မိနျးကလေးတှရေဲ့ အကဲခတျခနျ့မှနျးတတျတဲ့စိတျအရကိုလတျဇငျကွီးတဈယောကျခုတလော ကြှနျမအပျေါအရငျလိုမရိုးသားတော့ဘူး ဆိုတာကြှနျမစိတျထဲအလိုလို သိနတေယျ။ သူ့ပုံစံကိုပွောပွရရငျ သူက အသား လတျလတျ ခပျပိနျပိနျနဲ့ သာမာနျရုပျရညျမြိုးပါပဲ။ ကြှနျမနဲ့ အသကျ ၇ နှဈလောကျကှာပမေဲ့ ဝတျပုံစားပုံက လူငယျတဈယောကျလို မို့ နဂိုအသကျထကျ ငယျတယျထငျရတယျ။
ဘဝသမားမို့ အဝတျအစားအပွငျအဆငျကလညျး အမွဲရိုးရိုးပဲဖွဈနတေတျတယျ။ ဘယျတော့ မဆိုသူစကားပွောလိုကျရငျ တဈခုခုလုပျလိုကျရငျ သူစိတျထဲရှိတဲ့အတိုငျး ပွောတယျ လုပျတယျဆိုတဲ့ ရိုးသားမှုက သူ့မကျြနှာမှာ အထငျးသားပျေါနတေယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ အဲလိုရိုးသားတဲ့သူတဈယောကျက မရိုးမသားဖွဈနပွေီ ဆိုရငျ သူ့မကျြနှာထား နဲ့ပုံစံက သိပျသိသာပါတယျ။ ကြှနျမထငျထားတဲ့အတိုငျးပဲ သူတနတေ့ော့ကြှနျမကိုဖှငျ့ပွောလာခဲ့ တယျ။ ပွနျစဉျးစားကွညျ့ရငျဘယျရကျရယျလို့ခေါငျးထဲအတိအကမြရှိပမေဲ့ မှတျမှတျရရဖွဈနတေဲ့ တနင်ျဂနှနေလေ့ေး တဈခုမှာပေါ့။
အလုပျမှာဖွရှေငျးခဲ့ရတဲ့ စိတျညဈစရာကိစ်စတဈခြို့ကွောငျ့ ဘယျမှမထှကျခငျြပဲ အိမျမှာပဲကြှနျမခှအေိပျနမေိတယျ။ အဲလိုတုနျး ကိုလတျဇငျဆီကဖုနျးလာတယျ။ ဘာလုပျနလေဲ ဘယျမှမသှားဘူးလားတဲ့။ စိတျညဈစရာတှရှေိလို့ မသှားခငျြဘူးဆိုတော့ ဘီယာဝယျလာခဲ့မယျ တနရောမှာသောကျပွီး စကားပွောရအောငျတဲ့။ ကြှနျမလညျး သူပွောတာ လကျခံလိုကျပွီး အဝတျအစားတှဘောတှကေောကျလဲ သူလာချေါမဲ့အခြိနျကို စောငျ့နခေဲ့တယျ။ သူလာတော့ ညနေ ၆နာရီလောကျရှိပွီ။ ဘီယာပုလငျးလေးတှေ ကိုငျလို့ မွညျးစရာမုနျ့လေးဘာလေးဝယျရငျး သှားနကြေ ကနျဘောငျကိုပဲ လှညျးတနျးကနေ နှဈယောကျသား လမျးလြှောကျလာကွတယျ။
ညနစေောငျးမို့ ပွညျလမျးပျေါက တဝှီးဝှီးဖွတျသှားကွတဲ့ကားတှနေဲ့အတူ ဆောငျးတှငျးလေ ခမျြးစိမျ့စိမျ့က ကြှနျမတို့ကိုယျပျေါကို ဖွတျသနျးတိုကျခတျနတေယျ။ အေးကနဲဖွဈသှားတဲ့ပါးနဲ့ နားရှကျတှကေို ဂငျြးဂတျြကတျ လကျရှညျဝတျထားတဲ့ လကျတှနေဲ့ကိုငျအုပျရငျး ဆှယျတာ လကျစက ခပျပါးပါးပဲဝတျလာတဲ့သူ့ကို ခမျြးဘူးလား..လို့ လှမျးမေးလိုကျတယျ။ သူက ခေါငျးရမျးရငျး သောကျလိုကျရငျနှေးသှားမှာတဲ့။ ကြှနျမတို့နှဈယောကျစကားတပွောပွောနဲ့ ကနျဘောငျ အစှနျက ကြောကျတုနျး ပနျးခွံလေးထဲ ဝငျထိုငျလိုကျကွတယျ။ အဲဒီ့နရောက ကြောကျတုနျးနဲ့ သဈပငျတှကှေယျနလေို့ ဘီယာပုလငျးတှကေို လူမွငျသူမွငျကွီး မော့စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
နှဈယောကျသား ဘီယာလေးမော့ရငျး ဝယျလာတဲ့ကွကျကွျောလေးမွညျးရငျး ရငျမောရတဲ့ကိစ်စလေးတှရေငျဖှငျ့ရငျးပေါ့။ ကြှနျမကတော့သိပျမြားမြားစားစားမောစရာမရှိဘူးရယျ။ ပြျောလို့သာရနျကုနျမှာအလုပျလာလုပျနတော ပဲခူးမှာနလေညျး ကြှနျမတို့ မိသားစုကပွညျ့စုံကွတယျ။ အခုလညျး ရတဲ့လစာ ကိုယျသုံးတာ မလောကျတဲ့အပွငျ အိမျကတောငျ လှမျးပေး နရေသေးတယျလေ။ အလုပျကလညျး တဈခါတလစေိတျရှုပျစရာလေးတှရှေိတတျပမေဲ့ ပွလေညျသှားတော့လညျး ပွီးသှားတာပဲမဟုတျလား။ ကိုယျစိတျတိုငျးမကတြဲ့အခြိနျ ထှကျလိုကျရုံဆိုပမေဲ့ အတှအေ့ကွုံလညျးရအောငျ contract သုံးနှဈလညျးပွညျ့အောငျတော့ မကနြေပျတာလေးတှသေညျးခံပွီး လုပျနရေုံပဲ။
သူကလညျး သူ့အလုပျအကွောငျး အဆငျမပွသေေးတာလေးတှပွေောပွတာပေါ့။ ဟိုအကွောငျးဒီအကွောငျးပွောကွရငျး ကြှနျမအရမျးခဈြခဲ့ဖူးတယျဆိုတဲ့ ရီးစားဟောငျးအကွောငျး သူကမေးလာတယျ။ ဘီယာအရှိနျရီဝဝေနဲ့ အဲ့ဒီအကွောငျးတှပွေနျစဉျးစားရတာ တမြိုးကွီးရယျ။ အတိတျကိုပွနျရောကျသှားသလိုမြိုး ကြှနျမရဲ့ လှမျးလှမျးဆှေးဆှေးအသံတှကေို နားထောငျနရေငျး နာကညျြးစရာအခနျးတှရေောကျတော့ သူက တျောပါတော့ဟာတဲ့။ ငါမေးမိတာဆောရီးတဲ့။ ပွောရငျးနဲ့ ကြှနျမလကျကိုဆုပျကိုငျထားတယျ။ ဝဲတကျလာတဲ့ မကျြရညျတှကေို သူမမွငျအောငျ မကျြတောငျပုတျခကျပုတျခတျလုပျပွီး ခေါငျးကိုငုံ့လိုကျတာတောငျ သူကမွငျဖွဈအောငျ မွငျသှားသေးတယျ။
ကြှနျမလကျတဈဖကျကိုသူကကိုငျထားပွီး ကနျြတဲ့တဈဖကျကလညျးဘီယာပုလငျးကို ကိုငျထားတာ ကွောငျ့ မကျြရညျတှသေုတျဖို့ လကျမအားတဲ့ကြှနျမရဲ့မကျြနှာကို သူကမေးစကေ့နဆှေဲကိုငျပွီး မကျြရညျတှသေူ့လကျနဲ့သုတျပေးတယျ။ ပွီးတော့ကြှနျမကိုစိုကျကွညျ့ရငျး နငျ့နငျ့နဲနဲ စကားတဈခှနျးပွောတယျ။ “အဲ့ဒီကောငျအရမျးကံကောငျးတယျ” တဲ့။ ကြှနျမရငျထဲဆို့နငျ့နငျ့ကွီးဖွဈနတေယျ။ရငျထဲကငွိမျနတေဲ့မီးတောငျကို သှားဆှလိုကျသလိုပဲ ခြျောရညျပူပူတှကြှေနျမနှလုံးသားကို ဖုံးလှမျးနပွေီလေ။ သူက စကားစပွတျအောငျမကျြနှာလှဲပွီး တခွားအကွောငျးတှေ လြှောကျပွော နပေမေဲ့ ကြှနျမစိတျမဝငျစားနိုငျတော့ဘူး။ တုံ့ပွနျသံတိတျနတေဲ့ကြှနျမကို သူကစကားပွောနရေငျးတနျးလနျး လှညျ့ကွညျ့လိုကျရငျး သကျပွငျးတဈခကျြခတြယျ။
ကြှနျမတို့ကွားခွားနတေဲ့ ကြောကျတုံးလေးပျေါပွောငျးထိုငျလိုကျပွီး ကြှနျမကို ဖကျထားရငျးက သူငွီးတယျ။ ငါ့ညီမရယျ…တဲ့။ သူ့ရငျခှငျထဲကို ခေါငျးမှီလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ကြှနျမဆီက ရှိုကျသံသဲ့သဲ့လေးထှကျလာတယျ။ သူကွားမကွားတော့မသိဘူး။ စကားကို ဆကျလိုကျတယျ။ ငါနငျ့ကို အရမျးခဈြတယျဟာ…တဲ့။ အငျ…….။ ဗီဒီယိုဇာတျလမျးတဈခုကိုကွညျ့နရေငျး pause ကိုနှိပျလိုကျသလိုမြိုးပဲ ရညျးစားဟောငျးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ကြှနျမခံစားခကျြတှေ တိခနဲရပျသှားတယျ။ မြှျောလငျ့ပွီးသားစကားဆိုပမေဲ့ မမြှျောလငျ့တဲ့အခြိနျမှာ ကွားလိုကျရတာမို့ ကြှနျမရုတျတရကျကွောငျတောငျတောငျလေးဖွဈသှားတာရယျ။
အငျ…ဆိုပွီး မသဲမကှဲအသံနဲ့အတူ ကြှနျမသူ့ကိုခေါငျးထောငျကွညျ့လိုကျတယျ။ တဈခွားအခြိနျတှဆေို ထားပါတော့။ ဒီလိုအခြိနျကွီးမှာ သူပွောလိမျ့မယျလို့ ကြှနျမထငျမထားဘူး။ တကယျထငျမထားဘူး။ သူကတော့ ဖီးလျအပွညျ့နဲ့ ဆကျပွောနတေယျ။ “ငါနငျ့ကိုခဈြနခေဲ့တာကွာပွီ….ငါ့ဘဝငါ့အခွအေနနေဲ့ နငျစိတျဆငျးရဲမှာဆိုးလို့ပွောဖို့ခြိနျဆခဲ့ရတာ… နငျခုလိုမြိုး တခွားတဈယောကျအတှကျငိုနတေဲ့မကျြရညျတှကေို ငါ့မကွညျ့ရကျဖူးဟာ………ပွီးတော့ နငျဒီလိုအခဈြကွီးပုံမြိုး ငါတဈခါမှမတှဖေူ့းဘူး…….ငါလေးလညျးလေးစားတယျ အားလညျးအားကတြယျ…. ဒါတှနေားထောငျရတော့ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ငါတို့ခဈြသူဖွဈလာခဲ့ရငျတောငျ နငျသူ့ကိုခဈြတဲ့အခဈြမြိုး တဝကျလောကျတောငျ ငါမရရငျ မရပါစေ… ငါကတော့နငျ့ကိုအဲလိုမြိုးခဈြသှားခငျြတယျ သိလား…”
အူကွောငျကွောငျဖွဈနတေဲ့ကြှနျမကို ဒေါသဖွဈသလိုလို ရှကျသလိုလို စိတျတှကေ လှုပျနိုးလိုကျသလိုပဲ။ကြှနျမအခဈြက သူပွောသလို လေးစားလောကျတဲ့အခဈြမြိုးလို့လညျး ကြှနျမတဈခါမှမခံယူဘူးပါဘူး။ ကိုယျ့ကိုကိုယျ နိမျ့ကတြဲ့ သူမြားကိုမှီခိုလိုစိတျလှနျကဲလှနျးတဲ့ အခဈြလို့ပဲ သတျမှတျဖူးတယျ။ ပွီးတော့ ဒီကိစ်စတှနေဲ့ရောပွီး ပွောလိုကျတဲ့ သူ့ရီးစားစကား………. ကြှနျမ မကွိုကျဖူးရယျ။ ဘယျ့နယျ့….ရီးစားစကားဆိုတာ နှဈယောကျသား ကွညျကွညျနူးနူးနဲ့ စိတျလကျကွညျသာဖွဈနတေုနျး ပွောရမဲ့ဟာကို။ ငိုနတေဲ့ကြှနျမနှုတျခမျးတှကေ အခုဆို ခပျဆူဆူဖွဈပွီး သူ့ကိုရနျတှဖေို့ပွငျနပွေီ။
“ဒီမယျ ကိုလတျဇငျကွီး…….သူမြားက ဝမျးနညျးပွီးပွောပွနပေါတယျဆိုမှ ရှငျက ရီးစားစကားဖမျးပွောတာ ကောငျးသလား……..အရငျအကွောငျးတှနေဲ့ ရှငျအခုပွောတာနဲ့ ဘားမှလညျးဆိုငျဖူး…. ပှဲလနျ့တုနျးဖြာခငျးခငျြတဲ့ သဘောလား…….ပှဲက မလနျ့တော့ဘူး ပွီးသှားတာကွာပီ သိရဲ့လား……….. ပွောမယျဆိုလညျး အခြိနျလေး အခါလေး မရှေးဘူး… တကယျစိတျလတေယျ…တျောပွီ ပွနျမယျ” ပှစိပှစိနဲ့ကြှနျမပွောရငျး ထရပျလိုကျပွီး ပွနျဖို့ခွလှေမျးပွငျလိုကျတယျ။ ဘီယာပုလငျးတှလေညျးကုနျပွီလေ။ ဘောကျဆတျ ဘောကျဆတျနဲ့ ရှကေ့သှားတဲ့ ကြှနျမခွလှေမျးကိုအမှီလိုကျလာရငျး ဟာ…ငါကအဲလိုသဘောမဟုတျပါဖူးဟာ ဘာညာနဲ့ ပွူးပွူးပွဲပွဲလိုကျရှငျးပွနပွေနျတယျ။
ကြှနျမကတဈခှနျးမှ ပွနျမပွောဘဲ နှုတျခမျးကိုကျရငျး စူတူတူမကျြနှာပေးနဲ့ လမျးကိုသုတျသုတျလြှောကျနတေယျ။ ခဏကွာတော့ သူလညျး ဗလုံးဗထှေးတှပွေောနတောရပျလိုကျပွီး မကျြနှာသလေေးနဲ့ ငွိမျငွိမျလေးလိုကျလာတယျ။ ပွနျစဉျးစားကွညျ့တော့လညျး သူ့အမှားမဟုတျပါဖူး။ ကြှနျမဘာသာရှကျရမျးရမျးပွီး ဖွဈသှားတာ။ ကြှနျမသူ့ကို သနားလာတယျ။ ဒါပမေဲ့ ခကျြခငျြးကွီးတော့အဖွပေေးဖို့ တှနျ့နတေယျ။ ခုပဲစိတျဆိုးထားတာလေ။သနားခွငျး၊ ဂရုဏာသကျခွငျးကနဖွေဈပျေါလာတဲ့အခဈြဆိုတာလညျး တျောတျောအငျအားကွီးတယျလို့ ကြှနျမထငျတယျ။ တဈခါတလကေတြော့လညျး သနားတယျဆိုတာ အခွအေနအေဆငျ့အတနျးတှနေဲ့ မဆိုငျဘဲ မိနျးကလေးတှစေိတျထဲမှာ အလိုလိုပေါကျပှားလာတဲ့ မတ်ေတာစိတျမြိုးပါ။
ဥပမာ….သူ့ဘာသာ တဈခေါခေါ အိပျပြျော နတေဲ့ ယောကျြားကို သူ့မိနျးမက အျော…ငါ့ယောကျြားအိပျနတောလေးမြား…သနားစရာလေးပါလား…ဆိုပွီး အလကားနရေငျးသနားပွီးခဈြစိတျဝငျနမေိတာမြိုးပေါ့။ အခုလညျး ကြှနျမ ကိုလတျဇငျကိုသနားမိနပွေနျပီ။ သူ ကြှနျမကို ဖှငျ့ပွောလိုကျလို့ ကြှနျမစိတျဆိုးသှားပီထငျပွီး တဈရကျနှဈရကျလောကျ တှတေို့ငျးမကျြနှာငယျလေးနဲ့ဖွဈနတေော့ ကြှနျမလညျး ဂရုဏာစိတျတှေ တဈစိမျ့စိမျ့ယိုဖိတျပွီး ပွနျခဈြလိုကျမိပါတော့တယျ။ သူက သူ့ကိုမောငျလို့ချေါခိုငျးတယျ။ ကြှနျမကိုတော့တဈခါတလလေညျးကလေးလေးလို့ချေါတယျ။ သဲ လို့လညျး ချေါတယျ..သူစိတျကူးပေါကျရငျပေါကျသလိုပေါ့။ မောငျက ကြှနျမဆီကခဈြအဖွပွေနျရဖို့တောငျ မမြှျောလငျ့ခဲ့ဖူးလို့ ပွောပွပါတယျ။ မောငျ ကြှနျမကို ကွငျကွငျနာနာနဲ့တနျဖိုးထားခဈြသလိုကြှနျမကလညျး မောငျ့ရဲ့ရိုးသားခွငျးတှကေို တနျဖိုးထားပါတယျ။
သူ့ကိုဒီအရှယျအထိလူပြိုလားလို့မေးတော့ ရီပွီး သူ့ရီးစားဟောငျးတှအေကွောငျး ကြှနျမကို အကုနျပွောပွတယျ။ အသကျပဲသုံးဆယျကြျောနပေီ အတှအေ့ကွုံမရှိတဲ့လူပြိုဆိုတာဘယျရှိမလဲနေျာ့။ ဒါပမေဲ့ သူက အဲဒီ့ကိစ်စတှမှော တဇှတျထိုးမလုပျဘဲ ကြှနျမဆန်ဒကိုဦးစားပေးပါတယျ။ ခုခြိနျထိ နမျးတာလောကျကလှဲရငျ ကြှနျမတို့ကွား ဘာမှမဖွဈကွသေးဘူး။ စစခွငျးဖွဈခဲ့တဲ့အမှတျတရလေးကလညျး နဲနဲရီရပါတယျ။ အဲဒီ့နကေမောငျ့တိုကျခနျးမှာသူငယျခငျြးတှစေုပွီးသောကျကွစားကွတယျ။ မောငျ့အဖကေ ဘုရားဖူး ခရီးသှားနတေယျလေ။ ပုလငျးဆှဲတဲ့သူကဆှဲ ဘီယာဆှဲတဲ့သူကဆှဲ ဟငျးခကျြကောငျးတဲ့သူတှလေညျးပါတော့ အခြိနျတျောတျောကွာတဲ့အထိ ပှဲကောငျးနကွေတာ။
ကြှနျမက နောကျဖေးမီးဖိုခြောငျမှာ ရောကျနတေုနျး ဘယျအခြိနျထပွနျသှားကွလဲ မသိလိုကျဖူး။ မောငျ အနားကပျလာတော့ “အသံတှတေိတျသှားတယျ ဘယျရောကျကုနျကွလဲ” လို့ဘစေငျမှာ ပနျးကနျတှေ ဆေးနရေငျးက လှညျ့မကွညျ့ဘဲ မေးလိုကျတယျ။ “ပွနျသှားကွပွီ” လို့ပွောလိုကျတဲ့မောငျ့လသေံက ဘာကွောငျ့မှနျး မသိ တုနျတုနျရငျရငျကွီးဖွဈနသေလိုပဲ။မောငျကအနောကျကနေ ကြှနျမကိုသိုငျးဖကျထားလိုကျပွီး ဆံပငျတှစေညျးထားလို့ ရှငျးနတေဲ့လညျကုတျလေးကို ပါးစပျနဲ့ဖိနမျးလိုကျတယျ။ တဈအိမျလုံးမှာ မောငျနဲ့ကြှနျမပဲ ရှိတယျဆိုတဲ့အသိကွောငျ့ ကြှနျမရငျခုနျသံတှမွေနျလာတယျ။ မောငျ့ရငျဘတျနဲ့ကပျနတေဲ့ ကြှနျမနောကျကြောကလညျး မောငျ့ရငျခုနျသံ ကို ခံစားမိနတေယျ။
ဆေးပွီးသှားတဲ့ပနျးကနျကို ဘေးမှာလှမျးထားလိုကျတုနျးရှိသေး မောငျက ကြှနျမကိုယျကိုဆှဲလှညျ့လိုကျတယျ။ သောကျထားတဲ့အရကျနဲ့ စိတျလှုပျရှားတဲ့ရငျခုနျသံက နားထငျတှအေထိ တဒိတျဒိတျနဲ့ပြံ့လာသလိုပဲ။ မောငျနဲ့ ကြှနျမ ပူးပူးကပျကပျလေးဖကျထားရငျးရပျနကွေတယျ။ မောငျက ကြှနျမခေါငျ့းကိုကိုငျပွီး နှုတျခမျးတှကေို စုပျယူနမျးရှိုကျလိုကျ တယျ။ မောငျ့ရဲ့အနမျးတှကေ ခြိုမွိနျလှပါတယျ။ မောငျ့ရဲ့လြှာ ကြှနျမပါးစပျထဲတိုးဝငျလာတော့ သောကျထားတဲ့ အရကျ ကွောငျ့လားမသိ ကွမျးရှရှလေးဖွဈနသေလိုပဲ။ နမျးနရေငျးကလကျနှဈဖကျနဲ့ကြှနျမခါးကိုကိုငျမွှောကျလိုကျပွီး ဘစေငျဘေးကအုတျခုံအလှတျပျေါမွှောကျတငျလိုကျတယျ။
ဘောငျးဘီအတိုလေးဝတျထားတဲ့ကြှနျမပေါငျတှေ ကွားထဲကို မောငျ့ကိုယျလုံးကရောကျနပွေီ။ မောငျ့လကျတှကေ ကြှနျမရငျသားတှကေို အကြီပျေါကနကေိုငျရတာ အားမရတော့သလို အကြီကွယျသီးတှကေိုတဈလုံးခွငျးဖွုတျနတေယျ။ မူးနပေမေဲ့ စိတျအသိကွောငျ့ ပွတငျးပေါကျတှကေနေ တဖကျတိုကျခနျးတှကေိုလှမျးကွညျ့လိုကျသေးတယျ။ မောငျတို့တိုကျခနျးကအပျေါဆုံးထပျ ဖွဈပွီးဘေးမှာလညျး အဲလောကျမွငျ့တဲ့တိုကျခနျးမရှိတာကွောငျ့တိမျဖွူဖွူတှနေဲ့ ကောငျးကငျပွာပွာကိုပဲ ကြှနျမလှမျးမွငျနရေတယျ။ ကြှနျမဝတျထားတဲ့ဘရာကိုခှာခပြွီး ရငျသားတှကေိုမောငျ့ပါးစပျနဲ့စုပျနမျးနရေငျး ကြှနျမရဲ့ဘောငျးဘီကိုပါ ဆှဲပွီးခြှတျလိုကျတယျ။ ပနျတီကလညျးဘောငျးဘီနဲ့အတူရောပါသှားပွီ။
ကြှနျမကိုငျထားတဲ့မောငျ့ခေါငျးက အောကျကို တထဈခငျြးနိမျ့ဆငျးသှားတယျ။ကြှနျမရဲ့ပေါငျတှငျးသားတှကေို သှားမပါဘဲ နှုတျခမျးလေးနဲ့ ဟိုစုပျဒီစုပျလုပျလိုကျတော့ ကွကျသီးတှတေောငျတဖွနျးဖွနျးထကုနျတယျ။ ရငျတှခေုနျတာလညျး ပေါကျထှကျတော့မဲ့အတိုငျးပဲ။ ကြှနျမရဲ့ ပိပိလေးကို မောငျက လြှာမသုံးသေးဘဲအသာဖိကပျပွီးနမျးလိုကျတဲ့အခြိနျမှာတော့ နှုတျခမျးကိုကျထားတဲ့ကွားက အီးးးကနဲတဈခကျြအျောမိတယျ။ နှုတျခမျးနဲ့နှဈခကျြသုံးခကျြလောကျ အသာစုပျဆှဲပွီးတော့မှ လြှာကိုခြှနျခြှနျလေးလုပျပွီး အထဲကိုထိုးသှငျးလိုကျတယျ။ “အဟငျ့ဟငျ့….မောငျရယျဘယျလိုတှလေုပျနတောလဲကှယျ…” အဲသလိုအသံမြိုးကြှနျမဆီကထှကျမလာပါဘူး။ဘယျထှကျမလဲ။ မကျြလုံးစုံမှိတျ နှုတျခမျးကိုကိုကျပွီးအပီအပွငျ ခံစားနတော။
မကျြစိဖှငျ့လိုကျရငျလညျး မွငျနရေတဲ့ကောငျးကငျမှာ လဟေုနျစီးနရေသလိုပဲ ဝဲကနဲဝဲကနဲ လှငျ့လှငျ့ တကျသှားတယျ။ မောငျကသူ့လြှာကို ကြှနျမကိုယျအတှငျးသားတှထေဲကို အစှမျးကုနျထိုးသှငျးနရေုံတငျမကဘူး ထိပျကအစလေ့ေးကိုပါ လကျမနဲ့လှမျးကလိလိုကျတော့ အီးးးးးးးး ကြှနျမပေါငျတှတေောငျတဆတျဆတျတုနျတယျ။ အဲလိုမြိုး သုံးလေးခါလောကျ လုပျနရေငျးက လြှာကိုပွနျထုတျပွီး အထကျကနအေောကျအစုနျအဆနျပငျ့ပွီး လကျြလိုကျတော့ ကြှနျမရငျထဲ ရိုလာကိုစတာစီးရသလို ဒိုငျးကနဲဆောငျ့တကျပွီးမှ ဟာကနဲနိမျ့ဆငျးသှားတာ ဘစေငျပျေါကပွုတျကတြော့မယျမှတျပွီး အစှနျးတဈဖကျဆီကိုလကျနဲ့ လှမျးကိုငျထားလိုကျရတယျ။ ကြှနျမ ခံစားမှု အထှတျအထိပျကို ရောကျသှားပွီးတဲ့အခြိနျအထိ ထှကျလာတဲ့အရညျကွညျတခြို့ကို မောငျကလကျြပေးနတေုနျးပဲ။
သောကျထားတဲ့အရကျနဲ့ စိတျလှုပျရှားတဲ့ရငျခုနျသံက နားထငျတှအေထိ တဒိတျဒိတျနဲ့ပြံ့လာသလိုပဲ။ မောငျနဲ့ ကြှနျမ ပူးပူးကပျကပျလေးဖကျထားရငျးရပျနကွေတယျ။မောငျက ကြှနျမခေါငျ့းကိုကိုငျပွီး နှုတျခမျးတှကေို စုပျယူနမျးရှိုကျလိုကျ တယျ။ မောငျ့ရဲ့အနမျးတှကေ ခြိုမွိနျလှပါတယျ။ မောငျ့ရဲ့လြှာ ကြှနျမပါးစပျထဲတိုးဝငျလာတော့ သောကျထားတဲ့ အရကျ ကွောငျ့လားမသိ ကွမျးရှရှလေးဖွဈနသေလိုပဲ။ နမျးနရေငျးကလကျနှဈဖကျနဲ့ကြှနျမခါးကိုကိုငျမွှောကျလိုကျပွီး ဘစေငျဘေးကအုတျခုံအလှတျပျေါမွှောကျတငျလိုကျတယျ။ ဘောငျးဘီအတိုလေးဝတျထားတဲ့ကြှနျမပေါငျတှေ ကွားထဲကို မောငျ့ကိုယျလုံးကရောကျနပွေီ။
မောငျ့လကျတှကေ ကြှနျမရငျသားတှကေို အကြီပျေါကနကေိုငျရတာ အားမရတော့သလို အကြီကွယျသီးတှကေိုတဈလုံးခွငျးဖွုတျနတေယျ။ မူးနပေမေဲ့ စိတျအသိကွောငျ့ ပွတငျးပေါကျတှကေနေ တဖကျတိုကျခနျးတှကေိုလှမျးကွညျ့လိုကျသေးတယျ။ မောငျတို့တိုကျခနျးကအပျေါဆုံးထပျ ဖွဈပွီးဘေးမှာလညျး အဲလောကျမွငျ့တဲ့တိုကျခနျးမရှိတာကွောငျ့တိမျဖွူဖွူတှနေဲ့ ကောငျးကငျပွာပွာကိုပဲ ကြှနျမလှမျးမွငျနရေတယျ။ ကြှနျမဝတျထားတဲ့ဘရာကိုခှာခပြွီး ရငျသားတှကေိုမောငျ့ပါးစပျနဲ့စုပျနမျးနရေငျး ကြှနျမရဲ့ဘောငျးဘီကိုပါ ဆှဲပွီးခြှတျလိုကျတယျ။ ပနျတီကလညျးဘောငျးဘီနဲ့အတူရောပါသှားပွီ။ ကြှနျမကိုငျထားတဲ့မောငျ့ခေါငျးက အောကျကို တထဈခငျြးနိမျ့ဆငျးသှားတယျ။
ကြှနျမရဲ့ပေါငျတှငျးသားတှကေို သှားမပါဘဲ နှုတျခမျးလေးနဲ့ ဟိုစုပျဒီစုပျလုပျလိုကျတော့ ကွကျသီးတှတေောငျတဖွနျးဖွနျးထကုနျတယျ။ ရငျတှခေုနျတာလညျး ပေါကျထှကျတော့မဲ့အတိုငျးပဲ။ ကြှနျမရဲ့ ပိပိလေးကို မောငျက လြှာမသုံးသေးဘဲအသာဖိကပျပွီးနမျးလိုကျတဲ့အခြိနျမှာတော့ နှုတျခမျးကိုကျထားတဲ့ကွားက အီးးးကနဲတဈခကျြအျောမိတယျ။ နှုတျခမျးနဲ့နှဈခကျြသုံးခကျြလောကျ အသာစုပျဆှဲပွီးတော့မှ လြှာကိုခြှနျခြှနျလေးလုပျပွီး အထဲကိုထိုးသှငျးလိုကျတယျ။ “အဟငျ့ဟငျ့….မောငျရယျဘယျလိုတှလေုပျနတောလဲကှယျ…” အဲသလိုအသံမြိုးကြှနျမဆီကထှကျမလာပါဘူး။ဘယျထှကျမလဲ။ မကျြလုံးစုံမှိတျ နှုတျခမျးကိုကိုကျပွီးအပီအပွငျ ခံစားနတော။
မကျြစိဖှငျ့လိုကျရငျလညျး မွငျနရေတဲ့ကောငျးကငျမှာ လဟေုနျစီးနရေသလိုပဲ ဝဲကနဲဝဲကနဲ လှငျ့လှငျ့ တကျသှားတယျ။ မောငျကသူ့လြှာကို ကြှနျမကိုယျအတှငျးသားတှထေဲကို အစှမျးကုနျထိုးသှငျးနရေုံတငျမကဘူး ထိပျကအစလေ့ေးကိုပါ လကျမနဲ့လှမျးကလိလိုကျတော့ အီးးးးးးးး ကြှနျမပေါငျတှတေောငျတဆတျဆတျတုနျတယျ။အဲလိုမြိုး သုံးလေးခါလောကျ လုပျနရေငျးက လြှာကိုပွနျထုတျပွီး အထကျကနအေောကျအစုနျအဆနျပငျ့ပွီး လကျြလိုကျတော့ ကြှနျမရငျထဲ ရိုလာကိုစတာစီးရသလို ဒိုငျးကနဲဆောငျ့တကျပွီးမှ ဟာကနဲနိမျ့ဆငျးသှားတာ ဘစေငျပျေါကပွုတျကတြော့မယျမှတျပွီး အစှနျးတဈဖကျဆီကိုလကျနဲ့ လှမျးကိုငျထားလိုကျရတယျ။
ကြှနျမ ခံစားမှု အထှတျအထိပျကို ရောကျသှားပွီးတဲ့အခြိနျအထိ ထှကျလာတဲ့အရညျကွညျတခြို့ကို မောငျကလကျြပေးနတေုနျးပဲ။ ခဏကွာတော့မှ အားနာလာတာနဲ့ သူ့ခေါငျးကို ဆှဲထူပွီး မတျတပျပွနျရပျခိုငျးလိုကျတယျ။ ပေါငျလေးကိုစိပွီး ဘစေငျပျေါမှာထိုငျနတေဲ့ ကြှနျမက အဖြားတကျသလို တုနျတုနျယငျယငျကွီးဖွဈနတေုနျးပဲ။ မောငျ့ကို ကွညျ့လိုကျတော့ သူကလညျး နှမျးလတြဲ့ရုပျနဲ့ ခွမေခိုငျသလိုဖွဈနတေယျ။ “ဟငျ..မောငျဘာဖွဈတာလဲ” “မောငျ..မောငျလညျးပွီးသှားပွီ” “ဘာ” အမှနျတော့ကြှနျမက ကိုယျ့အရှိနျနဲ့ကိုယျတကျနလေို့ သူပွီးသှားတာတောငျသတိမထားမိလိုကျတာ။
သူကတော့ ဘာအဝတျအစားမှတောငျမခြှတျလိုကျရပဲ ပွီးသှားလရေဲ့။ ကြှနျမ တခှိခှိရီမိတယျ။ ခုခြိနျထိ သူ့ပစ်စညျးကို ကိုငျလညျး မကွညျ့ရသေးဘူး မွငျတောငျမမွငျဖူးသေးဘူးလေ။ “ခြှတျလိုကျ..ဘောငျးဘီကို” ကြှနျမခိုငျးတဲ့အတိုငျးမောငျဆှဲခြှတျလိုကျတယျ။ ပြော့ကနြတေဲ့ မောငျ့ဖှားဖကျတျောလေးက ဘှားကနဲပျေါလာတယျ။ ကြှနျမရီခငျြစိတျကိုထိနျးလိုကျပမေဲ့ ပွုံးသှားတဲ့နှုတျခမျးတှကေို မောငျကမွငျဖွဈအောငျ မွငျလိုကျပွီး “ဘာရီတာတုနျးကှ” လို့ မလုံမလဲပုံစံနဲ့လှမျးမေးလိုကျတယျ။ “ခိခိ..သေးသေးလေး” ပွောမိပွီးမှ သူစိတျမြားဆိုးသှားမလား ကွညျ့လိုကျတော့ သူကစနတေယျမှတျလားမသိပါဘူး။
“အံမာ…ညညျးကဘယျလောကျကွီးတာမွငျဖူးလို့တုနျး” “မောငျ့ထကျကွီးတာတော့ မွငျဖူးတာပေါ့ ဟီးဟီး “.သူ့မကျြနှာမဆိုစလောကျလေးကှကျခနဲပကျြသှားပွီးမှ အပွုံးယဲ့ယဲ့နဲ့ကြှနျမကိုကွညျ့နတေယျ။ ကြှနျမစိတျမကောငျး ဖွဈသှားတယျ။ မူးနလေို့သာ ပါးစပျကထှကျသှားတာပါ။ ပွီးတော့ မောငျ့ပစ်စညျးကအရမျးအသေးကွီးတော့မဟုတျပါဘူး။ အဲ့ထကျ သေးတဲ့ပိစိကှေးနဲ့တောငျကြှနျမကွုံဖူးတယျလေ။ ခုက ပြော့နတေဲ့အခြိနျမို့လညျးနမှောပေါ့။ ကြှနျမမောငျ့ကို ကွညျ့ရငျး အလေးအနကျပွောလိုကျတယျ။ “ဒါပမေဲ့ ကွီးတာသေးတာ အရေးမကွီးပါဘူးမောငျရယျ…….ကြှနျမမောငျ့ကိုခဈြတယျ”….. ပွီးပါပွီ။
တစ်ခြားသူတွေရောက်ကြပြီလား စပယ် အအေးဆိုင်လေးတစ်ခုရဲ့ ကောင်တာမှာ ငွေရှင်းဖို့တန်းစီနေတုန်း နာမည်ခေါ်ပြီး မေးလိုက်တဲ့အသံ ကြောင့် ကျွန်မလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်မတစ်ခါမှမမြင်ဖူးတဲ့လူတစ်ယောက်…… ဦးထုတ်ကိုခပ်ငိုက်ငိုက် ဆောင်းထားတော့ မျက်နှာကိုလည်းသေချာမမြင်ရဘူးလေ။ သူကကျောပိုးအိတ်ခပ်ကြီးကြီးတစ်ခုလည်း လွယ်ထားသေးတယ်။ ရုတ်တရက်ကြောင်သွားပေမဲ့ ဘယ်သူဆိုတာ ကျွန်မမှတ်မိလိုက်ပါတယ်။ “ အော်……ကိုလတ်ဇင်လား…..ဘယ်သူမှမရောက်ကြသေးဘူး စပယ်ပဲရောက်သေးတာ” အလိုက်သင့်ပြန်ဖြေရင်းသူ့ကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ သူက အွန်လိုင်းကနေ ခင်မင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းပါ။
မနေ့တနေ့ကမှ နိုင်ငံခြားက ပြန်ရောက်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ဖို့ ချိန်းထားလို့ ကျွန်မလည်း ဒီဆိုင်ကိုရောက်နေတာ။ ဓာတ်ပုံတွေမြင်ဖူးထားပေမဲ့ ရုတ်တရက်အပြင်မှာဆိုတော့ ကျွန်မဘယ်မှတ်မိပါ့မလဲ။ သူကတော့ ကျွန်မကို တန်းပြီးမှတ်မိတဲ့အပြင် အရင်တည်းက အပြင်မှာခင်ဖူးတဲ့သူငယ်ချင်းလို ရင်းရင်းနှီးနှီးစကားတွေဘာတွေပြောရင်း အေးဆေးပါပဲ။ နှစ်ယောက်သား မှာထားတဲ့အအေးတွေရတော့ စားပွဲတစ်ခုမှာဝင်ထိုင်လိုက်ကြတယ်။ “ဟဲဟဲ ကိုလတ်ဇင်က စပယ့်ကို တန်းမှတ်မိတာပဲနော်…စပယ်က မှတ်မိဝူးတော့်” စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့ကျွန်မပြောတော့ သူက “ မှတ်မိတာပေါ့ဟ ဓာတ်ပုံတွေဒီလောက်မြင်ဖူးနေတာ နင်ကအပြင်မှာလည်း ဒီရုပ်ပဲကို “ ကျွန်မရှက်ပြုံးလေးပြုံးမိတယ်။
အွန်ုလိုင်းမှာဓာတ်ပုံတင်ရင် လှလှပပပြင်ဆင်ပြီး ရိုက် ပြီးတော့မှအလှဆုံးပုံကိုရွေးပြီးတင်တာလေ။ အဲတာကိုအပြင်နဲ့တူတူပဲပြောတော့ပျော်တာပေါ့နော် ။ခနကြာတော့ ချိန်းထားတဲ့သူငယ်ချင်းတွေရောက်လာပြီမို့ ကျွန်မတို့ အင်းလျားကန်ဘောင်ဘက်ကို ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက ခြောက်ယောက် ခုနစ်ယောက်လောက်တော့ရှိတယ်။ အားလုံးက ကျွန်မနဲ့ အပြင်မှာရင်းနှီးပြီးသားတွေပါ။ ကိုလတ်ဇင်တစ်ယောက်ကိုပဲ…ခုမှတွေ့ဖူးကြတာလေ။ ဒါပေမဲ့ အွန်လိုင်းမှာ ရင်းနှီးပြီးသားသူတွေဆိုတော့ အပြင်မှာလည်း ပြောမနာဆိုမနာတွေပဲ။ သူငယ်ချင်းတွေက နင့်ကိုကို မပါဘူးလား….လို့ ကျွန်မကိုမေးကြတယ်။ ကျွန်မလည်း သူကနယ်မှာနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်း တစ်ခါတလေမှ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ရန်ကုန်ကိုလာတာဖြစ်ကြောင်း တစ်ယောက်လာမေးလိုက်ရှင်းပြလိုက်နဲ့ စိတ်တောင်ညစ်လာတယ် တကယ်။
ကန်ဘောင်မှာ မုန့်စားလိုက် စကားပြောလိုက် လမ်းလျှောက်လိုက်လုပ်ကြပြီးတော့ အိမ်ပြန်ကြဖို့ အချိန်ရောက်တော့ လမ်းကြောင်းတူတဲ့သူတွေ စုပြီး Taxi ငှားဖို့ မေးကြတယ်။ ကိုလတ်ဇင်ရယ်၊ နောက်ထပ် ကျွန်မသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရယ်က ပြန်မဲ့လမ်းတူတော့သုံးယောက်သား Taxi နဲ့အတူပြန်လာကြတယ်။ ပြောရအုံးမယ် အဲဒီသူငယ်ချင်းကောင်လေးကလည်း ခင်တာသိပ်မကြာသေးပေမဲ့ ငယ်ပေါင်းလိုပေါင်းတာ။ သူကလည်း ရည်းစားထည်လဲတွဲ ကိုယ်ကလည်း ရည်းစားနဲ့ဆိုပေမဲ့ တွေ့ကြရင် ချစ်ရယ် သဲရယ်ဆိုပြီး ပါးလေးကိုင်လိုက် မေးလေးကိုင်လိုက် လက်လေးတွဲလိုက်နဲ့ လုပ်နေကြတာ။ ကိုကိုကလည်း အဲဒါမျိုး အရမ်းသဝန်တိုတတ်တာလေ။ အဲဒီကောင်တွေနဲ့မပေါင်းနဲ့လို့မပြောရုံတမယ်ပဲ။
ကျွန်မကလည်း တားလေ အရွဲ့တိုက်လေသမားဆိုတော့ ကိုကိုက လေပြေလေးထိုးထိုးပြီးပြောရှာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့က ရိုးရိုးသားသားပေါင်းတာလေ။ ဘာအကန့်မှမရှိဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်လုံတော့ ကျွန်မသူတို့နဲ့ သွားတွေ့တိုင်း ကိုကို့ကို ပြောပြပါတယ်။သူသံသယမဖြစ်ပေမဲ့ ဖုန်းတွေတဂွမ်ဂွမ်ဆက်ပြီး မပြန်သေးဘူးလား…အခုဘယ်မှာလဲ…နောက်ကျနေပြီ အိမ်မပြန်သေးဘူးလား ဘာညာနဲ့ ဂျစ်တိုက်တာမျိုးတွေတော့ ခံရတာပေါ့။ ဇာတ်ရည်လည်အောင် နဲနဲရှင်းပြထားအုံးမယ်။ ကျွန်မနာမည်က စပယ်ပွင့်ဝါ ပါ။ အသက်၂၀ကျော်လောက် ရှိပြီး လောလောဆယ် company တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်။ ကျွန်မစာဝင်ဝင်ရေးဖြစ်တဲ့ Online group လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။
အဲဒီကနေ တဆင့် သူငယ်ချင်းတွေရပြီး ကိုယ့်အနီးအနားမှာနေတဲ့သူတွေဖြစ်နေရင် အပြင်မှာလည်း မြင်ဖူးအောင် ဆုံဖို့ ချိန်းကြတာပေါ့။ ကိုကိုကလည်း အလုပ်ကိစ္စနဲ့ရန်ကုန်တက်လာတဲ့အချိန်နဲ့ကြုံနေတာနဲ့ တွေ့ဖြစ်ကြတာပါ။ အမှန်ဆိုအွန်လိုင်းမှာက သူနဲ့ကျွန်မသိပ်မခင်ဘူး။ စကားတောင်မပြောဖူးဘူး။ အပြင်မှာတွေ့တော့လည်းအဲတိုင်းပါပဲ။ သူကစကားသိပ် မပြောပါဘူး။ ကျွန်မလည်း တခြားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့စနောက်နေတာနဲ့ သတိတောင်မထားမိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူက အဲဒီကတည်းက ကျွန်မကိုသဘောကျသွားပုံရတယ်။ နောက်ရက်တွေကျတော့ စကားလာလာပြောတယ်။ သိပ်တောင်မကြာလိုက်ပါဘူး။ ရည်းစားစကားပြောတော့တာပဲ။ အမှန်တိုင်းပြောရရင် သူကကျွန်မကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက ရုပ်ရည်ပိုင်းကိုပြောတာ။
စိတ်ဓာတ်ပိုင်းကျတော့လည်း ခုမှစသိတဲ့သူဆိုတော့ ကောင်းတယ် ဆိုးတယ် မခွဲခြားနိုင်သေးဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီတုန်းက ကျွန်မမှာပြသနာတစ်ခုတက်နေတယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ ကျွန်မနဲ့အရမ်းခင်တဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်း ဖြစ်တဲ့ ဇော်ဇော်နဲ့ မထင်မှတ်ပဲရည်းစားတွေဖြစ်သွားတာပါ။ ကျွန်မသူ့ကို မချစ်ဖူး။ သူကကျွန်မကို ကြိုက်နေတာ ကြာလှပြီ။ ပြောရရင် အလယ်တန်းကတည်းကပါ။ ဇော်ဇော်နဲ့ ကျွန်မက ငယ်သူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ ပြောမနာဆိုမနာ အတွင်းသိအစင်းသိတွေ ပြီးတော့အဲဒီတုန်းက စိတ်ကလည်း တအားညစ်နေတဲ့အချိန်….အရက်သောက်ချင်တယ်ဆိုပြီး သူ့ကိုခေါ်သောက်ရင်းဖြစ်ကုန်တာ။
မူးလာတော့ သူက ဖွင့်ပြောပြီး ကျွန်မကလည်း……..အမှန်တိုင်းပြောရရင် သိပ်တောင်မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဘာတွေပြောခဲ့မိလည်းဆိုတာ…အဖြေပေးမိလား မပေးမိလားလည်းမမှတ်မိဘူး။ သူကအတင်းဖက်ပြီးကစ်ဆင်တွေဆွဲတာတော့ မှတ်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူကအဲ့လောက်နဲ့ရပ်ပြီး ကျွန်မကိုအိမ်ပြန်ပို့ပေးပါတယ်။ နောက်နေ့ကျတော့ ဘာဖြစ်မှန်းတောင်ကျွန်မမမှတ်မိဘူး။ ဇော်ဇော်ကတော့ ကျွန်မကိုသူ့ရည်းစားအဖြစ် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးမှတ်ယူလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာပျားတုပ်တော့တာပဲ။ ကျွန်မ တကယ်ဆိုးပါတယ်။ ကျွန်မစိတ်တွေကအရမ်းကိုလေလွင့် နေချိန်မှာ အရက်ကိုဖိသောက်တယ်။
သောက်တော့ ဇော်ဇော်နဲ့ခုလိုတွေ မှားကုန်တယ်။ အရင်က ဖြူစင်ခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်လေးက အဲဒီတစ်ရက်နဲ့တင် ရေစုန်မျောတော့တာပါပဲ။ ဇော်ဇော် တစ်ယောက်ကတော့ အရမ်းကိုပျော်ပြီး သူ့အလုပ်ကသူတွေနဲ့တောင်ကျွန်မကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်သေးတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်ကျွန်မက အရမ်းချစ်ခဲ့တဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ ရက်ရက်စက်စက်တဖက်သတ်လမ်းခွဲခြင်းကို ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာ ဘယ်ယောက်ျားရဲ့အချစ်ကိုမှအယုံအကြည်မရှိတော့တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ။ အီစီကလီတွေလျှောက်ထားရင်း စိတ်ပျော်အောင်နေနေပေမဲ့ ရိုးသားတဲ့သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်ကို အရောင်ဆိုးမိတဲ့အထိ ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ခဲ့မိဘူး။
အခုတော့စိတ်ထဲကမပါဘဲ ရည်းစားတစ်ယောက်ရ…..ဖြတ်ဖို့ကလည်းချက်ချင်းကြီးမပြောရဲတော့ မျောပြီးတွဲနေရတယ်။ သူရောကျွန်မရော အလုပ်တွေရှိတော့ ညနေအလုပ်ဆင်းချိန်လောက်ပဲတွေ့ရတာပါ။ အိမ်တူတူပြန်တော့ Taxi ပေါ်မှာ ဒင်းက ပါးစပ်သရမ်းလိုက် လက်သရမ်းလိုက်လုပ်သေးတယ်။ လူလစ်ရင်လစ်သလို ခိုးနမ်းတယ်။ ရင်သားတွေကိုလည်းအတင်းကိုင်ပြီးဖြစ်ညှစ်တယ်။ ကျွန်မကအဲလိုအကျင့် တွေကိုမကြိုက်ဖူးရှင့်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ဆိပ်ကွယ်ရာမှာသာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရင်နေဖြစ်မယ်။ ဒီလို လူတွေမြင်နိုင်တဲ့ Taxi ပေါ်ကြီးမှာ သောင်းကျန်းတာမျိုးတော့လုံးဝမကြိုက်ဖူး။ အဲဒီလိုမျိုးမလုပ်ဖို့ မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ဇော်ဇော့်ကိုပြောရတယ်။
သူကတော့ကျားချောင်းသလိုချောင်းတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ နောက်တခါရုံးပိတ်ရက်ကျတော့ အပြင်ထွက်ဖို့ခေါ်တယ်။ ကျွန်မတို့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြတယ်။ သူကအတွဲခုံဝယ်မယ်ပြောပေမဲ့ ကျွန်မက မျက်စိအားမကောင်းလို့အတွဲခုံဆိုရင်ပိတ်ကားနဲ့ဝေးပြီး ကြည့်ရတာအားမရဘူးလို့ ဉာဏ်ဆင်ပြီး ရှေ့ခုံတွေပဲ ဝယ်လိုက်တယ်။ ဒါတောင်မှ သိပ်အလွတ်မပေးချင်ပါဘူး။ ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားက အမှောင်ခန်းတွေပြတဲ့အခါ ကျွန်မမျက်နှာကိုဆွဲလှည့်ပြီး အနမ်းတွေပေးတော့တယ်။ဇော်ဇော်ကလူကသာပိန်တာရယ်…သူ့အနမ်းတွေကအား အရမ်းပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်ရုံတင်မကဘူး လျှာကိုပါကျွန်မပါးစပ်ထဲထိုးထည့်ပြီးလှည့်ပတ်နေတယ်။
သူ့လက်ချောင်းမာကျစ်ကျစ်တွေကလည်း ကျွန်မရဲ့အိဖြိုးနေတဲ့ရင်သားတွေကို အတင်းဆုပ်ကိုင်လာတယ်။ ကျွန်မဝတ်ထားတာလည်ပင်းပေါက်နဲနဲကျယ်တဲ့တီရှပ်ဆိုတော့ လည်ပင်းပေါက်ထဲကနေလက်တွေကိုထိုးထည့်ပြီး ဝတ်ထားတဲ့ဘရာကြားက ရင်သားကို အမိအရစမ်းပြီးဆုပ်နယ်နေတယ်။ နို့သီးခေါင်းလေးကိုစမ်းမိသွားပြီး အတင်းပွတ်ချေနေလို့ ကျွန်မမှာအသံထွက်တော့မလိုဖြစ်ပြီး အံကိုကြိတ်ထားရတယ်။ ဘေးမှာလူတွေနဲ့လေ။ နောက်တော့သူ့လက်တွေက ကျွန်မဝတ်ထားတဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖြုတ်ပြီး အတွင်းထဲထိ ထပ်ကျူးကျော်လာတယ်။ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အားနည်းချက်ဖြစ်တဲ့ ရင်သားတွေကိုအမိအရအကိုင်ခံထားရတဲ့ကျွန်မက သူ့လုပ်ရပ်တွေကိုမငြင်းနိုင်တော့ပါဘူး။ သူ့လက်နဲ့မထိခင်မှာပဲ ကျွန်မပိပိလေးထဲက အရည်တွေစိုသလိုလိုဖြစ်လာတယ်။
သူလုပ်နေတာတွေကို ပါးစပ်ကဘာမှမပြောပေမဲ့ကျွန်မလက်ကိုင်အိတ်လေးကိုသူ့လက်ဝင်နေတဲဘောင်းဘီပေါ်တင်ပြီးဖုံးပေးလိုက်တယ်။ဘေးကလူတွေ မမြင်အောင်လေ။ သူ့လက်တွေက ကျွန်မအတွင်းသားတွေနဲ့ထိနေပါပြီ။ အပေါ်ကနေ ကိုင်ပြီးပွတ်နေရင်းနဲ့ လက်တစ်ချောင်းကိုကျွန်မပိပိလေးထဲထိုးထည့်လိုက်တယ်။ အရည်တွေလည်း စိမ့်နေတော့ ဇွပ်ကနဲဝင်သွားတာပေါ့။ ကျွန်မအသံမထွက်ရဲဘဲ သူ့ပခုံးနဲ့ကိုယ့်ပါးစပ်ကိုထိပြီးပိတ်ထားရတယ်။ ညည်းမိမှာစိုးလို့။ ရုပ်ရှင်ကဘာတွေပြနေမှန်းတောင်မသိလိုက်ပါဘူး။ ကျွန်မအာရုံတွေကသူ့လက်တွေပေါ်ပဲ ရောက်နေတာလေ။
အလုပ်များနေတဲ့သူ့လက်တွေကို ကျွန်မလက်နဲ့လှမ်းကိုင်ပြီးရပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ သူ့ပစ္စည်းကဘယ်လိုနေတယ် မသိဘူး။ လက်ခလယ်ကတော့အတော်ရှည်သား။ သူထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လုပ်နေတာခံနေရင်း လုပ်ပါများတော့ ကျွန်မအထဲက နာလာတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပီးလားမပီးလားတော့မသိဘူး။ အရည်တွေကတော့ တော်တော်လေး ထွက်နေပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ပြီးမှဘဲ Toilet ဝင်ပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်တယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးပြန်ထွက်လာကြတော့သူကဟိုဝင်ချင်သလို ဒီဝင်ချင်သလို လုပ်သေးတယ်။ ကျွန်မကလည်း ဘာလိုလိုညာလိုလိုနဲ့ငြင်းပြီး မုန့်လေးဘာလေးစားပြီး ပြန်လာကြတယ်။ကျွန်မ ဇော်ဇော့်ကိုမချစ်ဘဲ ဘာလို့တွဲရလဲဆိုရင် အားနာလို့ပါ။ ဟုတ်ပါတယ် အားနာလို့ခါးပါပါနေရပြီလေ။
သူက ကျွန်မအနွံတာတွေအရမ်းခံခဲ့တယ်။ ကျွန်မအပေါ်အရမ်းဂရုစိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲလိုလူမျိုးကို ငါနင့်ကိုမချစ်ပါဘူး အရက်မူးပြီး လက်ခံလိုက်မိတာပါ လို့ ကျွန်မဘယ်လိုပြောထွက်ပါ့မလဲ။ အဲဒါကြောင့် သူစိတ်ကျေနပ်အောင်ခဏတစ်ဖြုတ်တွဲတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အချိန်မလွန်ခင် သူ့ကိုအညင်သာဆုံးနည်းနဲ့ ဖြတ်ဖို့ ကျွန်မစဉ်းစားထားပြီးသားပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုကိုက ပေါ်လာခဲ့တာ။ တွေ့ဖူးတာမှ နှစ်ရက်တပိုင်းရှိသေးတာကို အတင်းကြီး ဖုန်းတွေဆက် အဖြေတွေတောင်း လုပ်တော့တာပဲ။ ဇော်ဇော်ကလည်း တနေ့ထက်တနေ့ ရောဂါတွေရင့်နေပြီလေ။ ဟိုသွားရအောင် ဒီသွားရအောင်ခေါ်နေပြီ။
ကျွန်မကငြင်းထားတော့သူလည်း ညစ်ပြီး ကျွန်မကို မဆက်သွယ်ပဲ ဂိမ်းပဲသွားသွားဆော့နေတယ်။ကျွန်မလည်း အဲဒါကိုအကြောင်းပြပြီး နင်ကငါ့ကိုဂရုမစိုက်ဘူးဘာညာနဲ့ သူ့ကို စိတ်ကောက်ပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့တစ်ခါတည်းကိုကို့ကို အဖြေပေးလိုက်တော့တာပဲ။ ကိုကို့ကိုအဖြေပေးပြီးတော့မှ ငါ့မှာ ချစ်သူရှိနေပြီ….လမ်းခွဲကြရအောင်ဆိုပြီး ဇော်ဇော့်ကို ပြောလိုက်တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ သူကလည်း အဲဒီ့အချိန် အလုပ်နဲ့ ခရီးထွက်သွားရတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်မကိုလာတွေ့ပြီး ပွားလို့မရတော့ဘူးလေ။ သူပြန်ရောက်တော့ ကျွန်မကိုတွေ့ဖို့ကြိုးစားသေးပေမဲ့ ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်မဲ ငြင်းလိုက်ပါတယ်။
သူလည်းဆက်မကြိုးစားတော့ဘူး။ နဲနဲတော့ထူးဆန်းတယ်နော်။ ကိုယ့်ကို ငယ်ငယ်လေးထဲက သိပ်ချစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ဖြတ်ရတာ အဲလောက်လွယ်မယ်တောင် ကျွန်မထင်မထားဘူး။ ကွယ်ရာမှာအသဲကွဲနေလားမသိပေမဲ့ ဇော်ဇော်က ဖုန်းဆက်တာတွေ ကျွန်မအိမ်နဲ့အလုပ်ကိုလည်းသိနေရဲ့သားနဲ့တွေ့ဖို့ကြိုးစားတာတွေ မလုပ်ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ကျွန်မလည်း ယောက်ျားတွေရဲ့ အရမ်းချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချစ်ကို ပိုပြီးအယုံအကြည်မဲ့လာတယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲ ကိုကိုနဲ့ကျွန်မ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်သိပ်တောင်မသိသေးခင် ရည်းစားတွေဖြစ်လာတယ်။
ချစ်သူတွေဆိုပေမဲ့ ကိုကိုကနယ်ကမို့ တစ်လတစ်ခါ နှစ်ခါလောက်ပဲတွေ့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျွန်မကလည်း အဲဒါကိုသဘောကျပါတယ်။ ခါတိုင်းလိုပဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့လိုက် လျှောက်သွားလိုက် လျှောက်စားလိုက် လုပ်လို့ရတယ်လေ။ ကိုကိုပါရင်စိတ်က နဲနဲကျဉ်းကျပ်တယ်။ ကျွန်မက ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းများတယ်။ ကိုကို့ကိုပါခေါ်ပြီး သူတို့နဲ့တွေ့တဲ့အချိန် သူတို့က စလိုက်နောက်လိုက်ရင် ကြည့်တဲ့ကိုကို့မျက်လုံး၊ ဖြစ်သွားတဲ့ကိုကို့မျက်နှာကို သူတို့ သိလားမသိလား မသိပေမဲ့ ကျွန်မအားနာမိတယ်။
ရည်းစားဖြစ်ပြီး နှစ်လလောက်နေတော့ ကိုကိုက ဘီယာသွားသောက်ရအောင်ဆိုပြီးခေါ်ပါတယ်။ ဟိုတယ်တစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်မက အပြင်းတွေပါချတတ်နေပြီဆိုတာ သူမသိဘိူး။ အဲဒီ့မှာ စားရင်းသောက်ရင်းနဲ့ သူက ကျွန်မကိုဖက်ပြီး ခုတင်ပေါ်ခေါ်သွားတယ်။ အဝတ်တွေဟိုချွတ်ဒီချွတ်နဲ့ အကုန်လည်းကုန်ရော စောင်ကြီးခြုံပြီး ဘာဂျာပေးတော့တာပဲ။ ကျွန်မလည်း ဘီယာအရှိန်တွေနဲ့ဆိုတော့ ရင်ခုန်သံတွေတဒိန်းဒိန်းနဲ့ပေါ့။ ဂျာလို့အားရတော့မှ စောင်ခြုံထဲက ချွေးတွေသီးနေတဲ့သူ့မျက်နှာထွက်လာပြီး သူ့ကိုယ်ပေါ်ကအောက်ခံဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ သူ့ပစ္စည်းက တော်တော်ကြီးပါတယ်။ ကျွန်မစိတ်ထင်ခုနစ်လက်မကျော်ကျော်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်။ လုံးပတ်ကလည်းခပ်ထွားထွားပဲ။
ကိုကို့မတိုင်ခင်တွေ့ခဲ့တဲ့ ဘဲတွေရဲ့ ပစ္စည်းတွေက စံမမှီတန်းမမှီလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်။ ဇော်ဇော့်ပစ္စည်းကိုတော့ကျွန်မ မတွေ့ဖူးလိုက်ဘူး။ တွေ့ဖူးဖို့နေနေသာသာ လက်နဲ့တောင် မစမ်းဖူးပါဘူး။ ဆက်ပြောရရင်ကိုကိုကသူ့ပစ္စည်းကိုထုတ်ပြီးတာနဲ့ ကျွန်မကို စပြီးမိတ်ဆက်ပေးတော့တာပဲ။ “ကိုကို သွင်းလိုက်တော့မယ်နော် ချစ်” ကျွန်မရီဝေဝနဲ့ ကိုကို့မျက်နှာကိုမော့ကြည့်လိုက်တယ်။ ဒီအခြေနေရောက်မှ မသွင်းနဲ့ပြောလို့လည်း နားထောင်မှာမှမဟုတ်တော့ပဲ။ ခေါင်းကိုပဲငြိမ့်ပြလိုက်တယ်။ တောင့်တင်းသန်မာနေတဲ့သူ့ပစ္စည်းကြီးက ကျွန်မကိုယ်ထဲကို တစ်ရစ်ချင်းတိုးဝင်လာတယ်။
ကိုကိုနဲ့မတွေ့ခင်ရှေ့မှာ ရည်းစားနှစ်ယောက်လောက်ထားဖူးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ ကိုကိုနဲ့ဒီနေ့ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံဆိုတော့ ကျွန်မရှက်ပြီးမျက်စိတွေမှိတ်ထားမိတယ်။ “ချစ်….ချစ်ပြီးတော့မလား ကိုကိုပြီးလိုက်တော့မယ်နော်” “အင်း..အင်း” ကျွန်မညည်းရင်းညူရင်းပဲပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ ကျွန်မ ရည်းစားတွေလည်းထားဖူးခဲ့ပြီး ခုလိုလည်း အတူနေခဲ့ဖူးပြီးမှ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြီးတယ်ဆိုတာကို မခံစားဖူးသေးဘူးဆိုရင် ယုံကြပါ့မလားနော်။ တကယ်ပါ။လိင်ဆက်ဆံချိန်မှာ စိတ်ကျေနပ်မှုရရင်ပြီးတာပဲ ပြီးတယ်မပြီးဘူးဆိုတာဘာအရေးလဲလို့ပဲ ကျွန်မသဘောထားခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း ကိုကိုမေးတဲ့ ပြီးတော့မလားဆိုတာကို အင်းလို့ပြန်ဖြေတာမဟုတ်ပါဘူး။
သူ့ကိုမြန်မြန်ပြီးခိုင်းလိုက်တာပါ။ အချိန်ကြာတော့ကျွန်မအတွင်းသားတွေက စပ်သလိုကျိန်းသလိုလိုဖြစ်လာပြီလေ။ ကိုကိုက မြန်မြန်သွက်သွက်ကြီး ၁၀ကြိမ်ကျော်ကျော်လောက် ဆောင့်ပြီးတာနဲ့ ကျွန်မကိုယ်ထဲကို သုတ်ရေတွေပန်းထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ ကိုကိုက ကျွန်မကိုစိတ်ကျေနပ်မှုပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မငြင်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ကျွန်မသူ့ကိုမချစ်ခဲ့ဘူး။ သူ့အချစ်ကိုပဲသာယာခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုန်းကတော့ သူ့ကိုချစ်သလိုလိုရှိပေမဲ့ ခုချိန်ပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင် သူ့ကိုမချစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာ ပိုပိုသိလာပါတယ်။ချစ်သူတွေဖြစ်လာပြီးမှ ကိုကို့အကြောင်းကို တဖြေးဖြေးသိလာရတာဆိုတော့ လိင်ဆက်ဆံချိန်မှာသူပေးတဲ့ သာယာမှုကလွဲရင် ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာသူ့ကို ကျွန်မမကြိုက်တဲ့ အချက်တွေ တော်တော်များများရှိပါတယ်။
ကိုကိုနဲ့ကျွန်မက ရှစ်နှစ်ကိုးနှစ်နီးပါး အသက်ကွာနေလို့လားတော့မသိဘူး။ကိုကို့ရဲ့ ပစိပစပ်များတာ၊ ဇီဇာကြောင်တာ၊ သဝန်တိုတာ၊ ချုပ်ချယ်တာ အဲဒီ့စိတ်တွေက သာမန်လူတွေထက်ပိုသလိုပဲလို့ကျွန်မခံစားရတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကိုသဝန်တိုတာလောက်တော့ ကျွန်မနားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မရဲ့ ယောက်ျားလေး သူငယ်ချင်းမှန်သမျှကို သံသယစိတ်နဲ့ကြည့်ပြီး နောက်ကွယ်ကျရင် ဘယ်ကောင်ကဘယ်လိုမကောင်းတာ ဆိုပြီး ပြောတာကျတော့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေဘက်က မခံနိုင်သလို ကျွန်မအပေါ်လည်း မယုံကြည်ရာရောက်တယ် မဟုတ်လား။ ကျွန်မကလည်း သူအဲ့လိုလုပ်လေ ပိုအရွဲ့တိုက်ချင်လေဆိုတော့ သူနဲ့ကြိုက်နေတုန်းမှာပဲ နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုပေါ်လာတော့တာပဲ။
“စပယ်မ….နင့်တိုက်ခန်းရှေ့ရောက်ပြီ ဆင်းလေ……” ကျွန်မသူငယ်ချင်းလှမ်းပြောလိုက်တဲ့အသံကြားမှ ကျွန်မလည်းအတွေးဆက်ပြတ်သွားတော့တယ်။ သူငယ်ချင်းနဲ့ ကိုလတ်ဇင်တို့ နှစ်ယောက်ကို နှုတ်ဆက်ပြီး ကျွန်မနေတဲ့တိုက်ခန်းပေါ်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မဇာတိက ပဲခူးမှာမို့ ရန်ကုန်မှာ မိဖြူနဲ့ လွင်မာဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့တိုက်ခန်းစုငှားပြီးနေပါတယ်။ ကျွန်မအခန်းထဲရောက်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်လည်းပြန်ရောက်နေကြပြီ။ ကျွန်မကိုမြင်တာနဲ့ မိဖြူက ပြုံးစိစိနဲ့…. “ဟဲ့ စပယ်…ငါဒီနေ့ပြန်လာတော့ ငါတို့တိုက်အောက်မှာ ဘယ်သူနဲ့တွေ့တယ်မှတ်လဲ” ကျွန်မလည်းရချိုးဖို့အဝတ်တွေချွတ်နေရင်းစပ်ဖြဲဖြဲနဲ့ပြန်မေးလိုက်တယ်။ “ဘယ်သူလဲ နင့်ကိုကြိုက်နေတဲ့နင်တို့အလုပ်ထဲကကုလားကြီးလား ဟိဟိ”
“ကောင်မ…အကောင်းပြောမလို့ဟာကိုနော်……. အရင်တစ်ပတ်ကငါတို့ကလပ်သွားတော့ နင်နဲ့တွဲကတဲ့ ကောင်လေးလေ အပြန်ငါတို့ကိုတောင်ကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးသေးတယ်လေ ငါနာမည်မေ့နေတယ် ဘဲသွေးဆိုလား ဟီးဟီးး” “ရဲသွေးပါဟဲ့ ..သူကဘာလာလုပ်တာတဲ့လဲ” “နင့်ကိုလာရှာတာပေါ့ ကောင်မရယ်……..ဖုန်းမကိုင်လို့တဲ့…………ငါလည်း နင့်အလုပ်ကအချိန်ပိုဆင်းရတယ် ဘာညာနဲ့ ပြောလိုက်တယ်…သူကနင့်အလုပ်ကဘယ်မှာလည်းမေးနေသေးတယ်…ငါက မေးချင်ရင်တိုက်ရိုက်မေးပါ လို့..ငါကြားထဲကနေ နင်ကြိုက်မှန်းမသိ မကြိုက်မှန်းမသိမပြောချင်ဘူးလို့ ပြောပေးလိုက်တယ်…။
အဲတော့မှ သူလည်းလမ်းကြုံလို့ဝင်ကြည့်တာပါတဲ့ ပြောပြီးလစ်သွားတာပဲ စပယ်တို့များစွံချက်နော်…ကိုကိုဇော်မင်းအောင်ကြီး တစ်ယောက်လုံးရှိနေတာတောင် တန်းလန်းတန်းလန်းတွေက များချက်ပဲ ဟိဟိ” “အေး ချောတဲ့လှတဲ့သူတွေဆိုတော့ ဒီလိုပဲပေါ့ဟာ”ကျွန်မမိဖြူကိုလျှာထုတ်ပြလိုက်ရင်းရေချိုးခန်းထဲဝင်လာလိုက်တယ်။ရေချိုးနေရင်းရဲသွေးအကြောင်းကို စဉ်းစားမိသေးတယ်။ ကောင်လေးက ၁၈ ၁၉နှစ်လောက်ပဲရှိအုံးမယ်။ တက္ကသိုလ်တက်နေတုန်းတဲ့။ စတိုင်ကခပ်မိုက်မိုက်လေး။ မျက်နှာကလည်း ကိုးရီးယားမင်းသားတွေလို နုနုဖတ်ဖတ်နဲ့။ ကျွန်မကဒီလိုပုံစံမျိုးမကြိုက်တတ်ပါဘူး။ပုံစံကသန့်သန့်ပြန့်ပြန့်မို့ ကလပ်ထဲမှာ ကနေရင်း အတင်းကြီးလာရောတော့လည်း ရေလိုက်ငါးလိုက်ပြန်ဆက်ဆံလိုက်တာပါ။
အပြန်ကိုလိုက်ပို့ရင်း ကျွန်မတို့ သုံးယောက်ဖုန်းနံပါတ်တွေတောင်းသွားသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဖုန်းဆက်တာက ကျွန်မတစ်ယောက်ထဲကို……..။ ရဲသွေးတစ်ယောက်ကျွန်မကိုနေ့ရောညရောဖုန်းဆက်ပြီးကျူနေတာကို ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေကို အသိမပေးဘဲထားခဲ့တယ်။ ညဘက်ကိုကိုနဲ့ဖုန်းပြောပြီးတာနဲ့သူ့ဖုန်းကတန်းဝင်လာတော့ဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေလည်းမရိပ်မိကြဘူးလေ။ သူတို့ကလည်း သူတို့ဘဲတွေနဲ့ဖုန်းပြောနေရတာနဲ့ အာရုံတောင်စိုက်မိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ရေချိုးပြီးတာနဲ့ ကိုကို့ဖုန်းကတန်းဝင်လာလို့ပြေးကိုင်ရတယ်။ မကိုင်မိဘဲ missed call များဖြစ်နေရင်ရစ်လို့ဆုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ။
အခုတောင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့မယ်ပြောထားရက်နဲ့ အိမ်ပြန်နောက်ကျတယ်ဆိုပြီး ရစ်နေတာမပြီးတော့ဘူး။ နားနှစ်ဖက်လုံးထူပူနေအောင်နားထောင်ပြီးတော့မှ ခါတိုင်းလိုပဲ အရမ်းချစ်လွန်းလို့ပါ ချစ်ရယ်နဲ့ အဆုံးသတ်ပြီးဖုန်းချသွားတယ်။ ဟူး……ဒီဘဲကြီးကိုမြန်မြန်ဖြတ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ် ထင်တယ်လို့စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့တွေးမိတယ်။ “ဟဲ့ စပယ် နင့်ကိုကိုနဲ့ပြတ်သွားကြပြီဆို…. ” ရုံးမှာအလုပ်လုပ်နေရင်း Gtalk ကလှမ်းမေးလိုက်တဲ့ ကိုလတ်ဇင်ကြောင့် လုပ်လက်စအလုပ်ခဏထားပြီး ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။“ဟုတ်တယ် ကိုကြီး…စပယ်တို့ပြတ်သွားပြီ” “အမ်…ဘယ်လိုဖြစ်ကြတာတုန်းဟာ….နင်တို့ကလည်း…” “ဒီလိုပဲလေ..တစ်ပူငြိမ်းတာပေါ့ အဟီး…. ”
“အွန်…..ငါကတော့နင်အသဲတွေကွဲပြီး ဝမ်းနည်းနေမလားလို့…အရက်သောက်ကြမလားလို့အဖော်စပ်မလို့…. ဟီးဟီး နင်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ ထားပါတော့ ” “အမယ်လေး…သောက်ချင်ရင်သောက်ပေါ့…..စပယ်တို့က သူများလိုအသဲကွဲတယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြချက်နဲ့ သောက်တာ မှုတ်ဖူး…ကြိုက်လို့သောက်တာ ဟိဟိ ” “ အေးအေး..အာ့ဆိုလည်း ဒီတပတ်စနေအားလား..တွေ့ကြမယ် တစ်ခြားသူတွေလည်းခေါ်ထားလိုက်မယ်” “စနေမအားဝူး….. တနင်္ဂနွေလုပ်လိုက်နော်” “အေးပြီးရော…အသဲကွဲတဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့နင်တိုက်ဖို့ပြင်ထား ” “မကွဲပါဝူးဆိုနေမှ ” Computer screen ပေါ်မှာ smiley အရုပ်လေးတွေ ရီပြလိုက် လျှာထုတ်ပြလိုက် စိတ်ဆိုးပြလိုက်နဲ့ အလုပ်များနေကြတာကို အဓိပါယ်မဲ့ငေး ကြည့်ရင်း ကိုကိုနဲ့ပြတ်သွားရတဲ့အကြောင်းအရင်းက ကျွန်မခေါင်းထဲပေါ်လာတယ်။
ပြောရရင်ကိုကိုနဲ့ကျွန်မပြတ်သွားတာ ရဲသွေးကြောင့်ပါ။ ကိုကိုနဲ့ညတိုင်းဖုန်းပြော ပြီးတာနဲ့ ရဲသွေးကကျွန်မဆီဖုန်းဆက်တယ်။ ဘယ်အချိန်လောက်ဆက်လို့ကျွန်မပြောထားလို့ပါ။ တစ်ညကျတော့ ရဲသွေးနဲ့ပြောနေတုန်းကိုကိုက ပြောစရာကျန်သေးလို့ ထပ်ဆက်တော့ဖုန်းကမအားဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေဆီဆက်တော့လည်း မိဖြူက အပြင်ရောက်နေတယ်။ လွင်မာက သူ့ဘဲနဲ့ပြောနေလို့ ဖုန်းမအားဘူး။အဲဒီ့မှာကိုကိုကကျွန်မကိုမင်္သကာဖြစ်သွားတယ်နဲ့တူတယ်။ နောက်နေ့ မပြောမဆိုနဲ့ ရန်ကုန်ရောက်ချလာပြီး ကျွန်မ တို့တိုက်ရှေ့မှာ ချောင်းနေတာ။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီနေ့က ရဲသွေးကရုံးလာကြိုပြီး ပြန်လိုက်ပို့ပေးတာနဲ့ တည့်တည့်တိုးတိုးတယ်။ ရဲသွေးပြန်သွားတာနဲ့ ကျွန်မဆီလာပြီး မျိုးစုံစွပ်စွဲတော့တာပဲ။
အဲဒီအချိန်မှာရဲသွေးနဲ့ကျွန်မအီစီကလီဆိုပေမဲ့ ဘာမှဖြစ်ကြသေးတာတော့မဟုတ်ဘူး။ သူက အော်ကြီးဟစ်ကျယ်မဟုတ်ပေမဲ့ ဒေါသသံနဲ့ ပြောနေတော့ အသံတွေကကျယ်လာပြီး လမ်းသွားလမ်းလာတွေနဲ့ အနီးအနားလူတွေကလည်းကြည့်နေကြတာ။ကျွန်မလည်းရှက်လာတယ်။ သူ့ကိုလည်းစိတ်ကုန်လာပြီး ဘာမှရှင်းပြမနေချင်တော့တာနဲ့ “ဟုတ်တယ်… ရှင်စွပ်စွဲတာတွေအားလုံးမှန်တယ် ကျေနပ်ပြီလား” လို့ပြောချပလိုက်တယ်။ သူက သူမျှော်လင့်ထားပုံမရတဲ့ စကားကို ကြားလိုက်ရသလိုမျိုး တအံ့တသြဖြစ်ပြီး ခဏငြိမ်သွားတယ်။
နောက်တော့ တောက် တစ်ချက်ခေါက်ပြီး ဘာမှမပြောတော့ပဲ လှည့်ထွက်သွားတော့တာပဲ။ အဲဒီမှာတင် ကိုကိုလို့ကျွန်မခေါ်ခဲ့တဲ့ ကိုဇော်မင်းအောင်နဲ့ ဇာတ်လမ်း တစ်ခန်းရပ်သွားပါတော့တယ်။ “မ..သောက်လေ သိပ်လည်းမသောက်သလိုပဲ…ဘာထပ်မှာပေးရမလဲ” ပြုံးပြုံးလေးမေးနေတဲ့ ရဲသွေးကို ကျွန်မခေါင်းရမ်းပြပြီး ရှေ့ကဘီယာခွက်ကိုလှမ်းကိုင်လိုက်တယ်။ ဒီကောင်လေးက အပြုံးတော့ချိုသား။ သောက်ရင်းစားရင်း စကားပြောရင်းနဲ့ပဲ ကျွန်မအရှိန်မလွန်အောင် သတိထားနေတဲ့ကြားက ခေါင်းထဲမှာတော်တော် မူးလာတယ်။
အန်ချင်သလိုလိုလည်းဖြစ်လာတာနဲ့ Toilet ထဲဝင်ပြီး လုပ်စရာရှိတာတွေလုပ် (အန်တာတို့ ရှူရှူးပေါက်တာတို့ပြောတာ) ပြန်ထွက်လာတော့ သူက တံခါးဝမှာရပ်စောင့်နေပြီး “မ မူးနေပြီးမလား..သွားကြမယ် ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပို့မယ်” အဲလိုပြောပြီး ကျွန်မကိုခေါ်သွားတာ ဟိုတယ်တစ်ခုကိုပါ။ အခန်းထဲရောက်တော့တံခါးပိတ်ပြီးရုံရှိသေး ကျွန်မကိုနံရံမှာ ဆွဲကပ်…သူကထိုင်ချင်လိုက်ပြီးကျွန်မဝတ်ထားတဲ့ဂါဝန်အတိုလေးအောက်ကို သူ့ခေါင်းထိုးထည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်မလည်း ဂါဝန်အုပ်နေတဲ့သူ့ခေါင်းကိုကိုင်ထားရင်း ငါဘာလို့ဒီကိုလိုက်လာမိပါလိမ့်..လို့ မူးမူးနဲ့ယောင်တောင် ပေါင်တောင်ဖြစ်ပြီးစဉ်းစားနေမိတယ်။
သတိပြန်ဝင်လာတော့ သူကကျွန်မဂါဝန်ကိုဆွဲချွတ်ပြီးနေပြီ။ သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်မကိုယ်လုံးကို ဆွဲလှည့်လိုက်ပြီးနံရံကိုလက်ထောက်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ပန်တီ ပန်းနုရောင်လေးကို ဆွဲချွတ်ချလိုက်ရင်း ကျွန်မခြေထောက်တွေကို သူ့လက်နဲ့ တစ်ဖက်တစ်ချက်ဆီကိုင်ပြီး ကားလိုက်တယ်။ သူ့ဘောင်းဘီကိုလည်းချွတ်လိုက်ပြီး အနောက်ကနေသူ့ပစ္စည်းနဲ့ ခြေထောက်ကားထားလို့ နဲနဲဟနေတဲ့ ကျွန်မအကွဲကြောင်းလေးကို ပွတ်ပြီးဆွဲနေပါတယ်။ “ဟား……..ချစ်လိုက်တာမရယ်” သူ့ပစ္စည်းကိုထိုးထည့်ရင်းပြောလိုက်တာကြောင့် ချစ်လိုက်တာလို့ပြောတာလား ကျပ်လိုက်တာလို့ ပြောတာလား မသဲကွဲလိုက်ဖူးရယ်။
တကယ်လည်းသူ့ပစ္စည်းကကျွန်မကိုယ်ထဲမှာကျပ်ညပ်နေပါတယ်။ နောက်ကျောပေးထားတာ ကြောင့် ကျွန်မလှမ်းမမြင်ရသေးဘူး။ ထိန်းမရနိုင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒကြောင့် ကျွန်မခြေထောက်တွေပိုကားလာပြီး တင်ကိုအနောက်ပစ်ထားမိတယ်။ ဒီလိုပုံစံကယောက်ျားလေးကအရပ်အရမ်းရှည်နေရင်အဆင်မပြေတတ်ဖူးမဟုတ်လား။ သူကတော့ကျွန်မနဲ့အရပ်မတိမ်းမယိမ်းမို့ အနောက်ကနေအဲလိုထည့်ရတာ အဆင်ပြေပုံရတယ်။ ကျွန်မရဲ့ကြိုးသိုင်းဒေါက်ဖိနပ်ကိုမချွတ်ရသေးတာလည်းပါမှာပေါ့။ “အ..အားးး” ရဲသွေးရဲ့ဆောင့်ချက်တွေပိုပြီးမြန်လာသလို ကျွန်မရဲ့ညည်းသံတွေကလည်းပိုပိုကျယ်လာတယ်။ တင်တွေကိုလည်းအနောက်ပစ်ပြီး တန်ပြန်ဆောင့်ပေးနေမိတယ်။
သူကတော့ ဘရာကျွတ်သွားပြီးဖြစ်တဲ့ ကျွန်မရင်သားနှစ်ဖက်ကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ခြေမွရင်း အမြန်ဆုံးနှုန်းနဲ့ဆောင့်ရင်း ခရီးဆုံးကိုရောက်အောင် သွားနေပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်မတင်သားတွေကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့အတင်းဆွဲကပ်ဖိညှစ်ရင်းက “ပြီးတော့မယ် ပြီးတော့မယ် မ…..အားးးအားးး” အသံမျိုးစုံအော်ဟစ်ရင်း ကျွန်မနောက်ကျောကိုမှီဖက်လိုက်တယ်။ အိပ်ယာပေါ်လှဲအိပ်ရင်း အမောဖြေနေကျတော့မှ သူ့ပစ္စည်းကိုကျွန်မသေသေချာချာကြည့်မိတယ်။ အရှည်က သာမာန်လောက်ပဲ ……လုံးပတ်ကတော့တော်တော်ကိုကြီးပါတယ်။တိုတိုတုတ်တုတ်ကြီးပေါ့။ ကျွန်မကြည့်နေတာကို သူတွေ့သွားပြီး သူ့ပစ္စည်းကိုလက်နဲ့အုပ်ထားလိုက်တယ်။
“ဟိဟိ မကြည့်ပါနဲ့ မရယ်…သားဟာလေးက တိုတိုလေး” “အယ် အဲလောက်လည်းမတိုပါဘူး…လုံးပတ်ကတော်တော်ကြီးနေတယ်နော်….. ဆေးတွေဘာတွေများစားထားလား” “အာ..မစားပါဘူး မရယ်…ဒါအော်ရီဂျင်နယ်ပါ အဟိ……….ဒါနဲ့… မမပူစီလေးကလေ အရမ်းကျပ်ပြီးကောင်းတာပဲ သိလား” “အော်…ဒါကတော့ နင့်ဟာကြီးက တော်တော်တုတ်တာကိုး ရဲသွေးရဲ့…ကျပ်မှာပေါ့” သူ့ကိုမျက်စောင်းထိုးရင်း ပြောလိုက်တော့ သူကခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ကျွန်မနှုတ်ခမ်းတွေကို ဖိကပ်ပြီးနမ်းလိုက်တယ်။ လူသာငယ်ပေမဲ့ သူအတွေ့အကြုံအပြည့်ရှိပုံရပါတယ်။ ဒီကိစ္စမတိုင်ခင်က ကျွန်မတို့ညဘက်လျှောက်လည်ကြရင်း ကားပေါ်မှာ သူက ဟိုကိုင်ဒီနှိုက်လုပ်ဖူးပြီးပြီ ဆိုတော့ သိပ်ရှက်မနေကြတော့ဘဲ ဒီလိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဖြစ်ကြတာလေ။
အဲဒီ့နေ့ ဟိုတယ်က မပြန်ခင် သူနဲ့ နှစ်ခါလောက် ထပ်ဆွဲဖြစ်ကြပါသေးတယ်။ “စောင့်မှာပေါ့မောင်ရယ်…စိတ်ချပါ” အလိုက်သင့်စကားတွေပြောခဲ့ပေမဲ့ သူထွက်သွားကတည်းက ကျွန်မ internet က သူသိတဲ့ ရှိသမျှ အကောင့်တွေကို မသုံးတော့ဘဲ အသစ်လုပ်လိုက်ပြီး သူ့ကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်တာကြာပြီလေ။မသိတဲ့နိုင်ငံခြား Ph call တွေလည်း black list သွင်းပလိုက်တာ။ ရည်းစားသက်တမ်းလည်း ဘယ်လောက်မှမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုနိုင်ငံခြားထွက်သွားတဲ့ချစ်သူကိုစောင့်နေပြီး သူက ဖြတ်တာခံမဲ့အစား ကျွန်မကပဲစပြီးသံယောဇဉ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်။ အတွေ့အကြုံတွေအရ သူ့လိုကောင်လေးမျိုးတွေ ဘယ်လိုအချိုးချိုးတတ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်မသိပြီးသား။ ကျွန်မခန့်မှန်းတာ မမှားပါဘူး။
သိပ်မကြာခင်ပဲ ကျွန်မဆီကို ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖုန်းဆက်ပြီး သူက ရဲသွေးရဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့အကြောင်း…..ရဲသွေးကသစ္စာဖောက်ပြီး နောက်တစ်ယောက်တွဲနေတယ်ကြားလို့ စုံစမ်းနေတာ ခုမှပဲကျွန်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရတဲ့အကြောင်း…..သူတို့ချစ်သူ နှစ်ယောက်ကို မနှောက်ယှက်ဖို့နဲ့ အခုနိုင်ငံခြားထွက်သွားပြီးတော့ အွန်လိုင်းမှာတွေ့တာတောင် ရဲသွေးက သူ့ကိုအင်တင်တင်ဆက်ဆံနေတဲ့အကြောင်းတွေလာပြောပါတော့တယ်။ ကျွန်မရီရီမောမောနဲ့ ဒီလိုလေးပဲ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ “သူထွက်သွားကတည်းက အမသူ့ကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်တာလေ…မယုံရင်သူ့ကိုမေးကြည့်လိုက် ညီမလေး.. သူ့မှာရီးစားရှိနေတာ သိလို့တော့မဟုတ်ပါဘူး…အမဘာသာ ပျင်းလာလို့ သူ့ကိုလည်း မယုံလို့ ဖြတ်လိုက်တာ…။
ညီမလေး စိတ်မပူပါနဲ့ သူအမကိုလုံးဝဆက်သွယ်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဖူး အမဖုန်းလည်း ပြောင်းတော့မှာ…… အမကလည်းသူ့ကိုအဆက်အသွယ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ ညီမလေးပဲသူ့ကိုပြောပြလိုက်ပါ….အခုညီမလေးအကြောင်း အမသိသွားပြီဆိုတော့ အမသူ့ကို မုန်းလိုက်ပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့…… အမလည်းအကြောင်းပြချက်ရသွားတာပေါ့ ဟင်းဟင်း လနှစ်လလောက်ခြေငြိမ်နေခဲ့တယ်။ရီးစားထားရတာလည်း ပျင်းလာသလိုလိုမို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လျှောက်သွားလိုက် လည်လိုက်ပတ်လိုက်နဲ့ပဲ ပျော်ပျော်နေလိုက်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ကိုလတ်ဇင်လည်း ပါတာပေါ့။
သူ့အိမ်က ကျွန်မနေတဲ့နေရာနဲ့ နီးတော့ ခဏခဏဆိုသလို တွေ့ဖြစ်ကြပါတယ်။ တစ်နေရာရာသွားချင်လို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မှ အဖော်စပ်လို့မရရင်တောင် သူ့ကို အမြဲခေါ်လို့ရတယ်လေ။ သူကလည်း ကျွန်မခေါ်ရင် အလုပ်တွေအသာထားခဲ့ပြီး ဘယ်နေရာမဆို လိုက်တာကိုး။မိန်းကလေးတွေရဲ့ အကဲခတ်ခန့်မှန်းတတ်တဲ့စိတ်အရကိုလတ်ဇင်ကြီးတစ်ယောက်ခုတလော ကျွန်မအပေါ်အရင်လိုမရိုးသားတော့ဘူး ဆိုတာကျွန်မစိတ်ထဲအလိုလို သိနေတယ်။ သူ့ပုံစံကိုပြောပြရရင် သူက အသား လတ်လတ် ခပ်ပိန်ပိန်နဲ့ သာမာန်ရုပ်ရည်မျိုးပါပဲ။ ကျွန်မနဲ့ အသက် ၇ နှစ်လောက်ကွာပေမဲ့ ဝတ်ပုံစားပုံက လူငယ်တစ်ယောက်လို မို့ နဂိုအသက်ထက် ငယ်တယ်ထင်ရတယ်။
ဘဝသမားမို့ အဝတ်အစားအပြင်အဆင်ကလည်း အမြဲရိုးရိုးပဲဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဘယ်တော့ မဆိုသူစကားပြောလိုက်ရင် တစ်ခုခုလုပ်လိုက်ရင် သူစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ပြောတယ် လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ ရိုးသားမှုက သူ့မျက်နှာမှာ အထင်းသားပေါ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အဲလိုရိုးသားတဲ့သူတစ်ယောက်က မရိုးမသားဖြစ်နေပြီ ဆိုရင် သူ့မျက်နှာထား နဲ့ပုံစံက သိပ်သိသာပါတယ်။ ကျွန်မထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ သူတနေ့တော့ကျွန်မကိုဖွင့်ပြောလာခဲ့ တယ်။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘယ်ရက်ရယ်လို့ခေါင်းထဲအတိအကျမရှိပေမဲ့ မှတ်မှတ်ရရဖြစ်နေတဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့လေး တစ်ခုမှာပေါ့။
အလုပ်မှာဖြေရှင်းခဲ့ရတဲ့ စိတ်ညစ်စရာကိစ္စတစ်ချို့ကြောင့် ဘယ်မှမထွက်ချင်ပဲ အိမ်မှာပဲကျွန်မခွေအိပ်နေမိတယ်။ အဲလိုတုန်း ကိုလတ်ဇင်ဆီကဖုန်းလာတယ်။ ဘာလုပ်နေလဲ ဘယ်မှမသွားဘူးလားတဲ့။ စိတ်ညစ်စရာတွေရှိလို့ မသွားချင်ဘူးဆိုတော့ ဘီယာဝယ်လာခဲ့မယ် တနေရာမှာသောက်ပြီး စကားပြောရအောင်တဲ့။ ကျွန်မလည်း သူပြောတာ လက်ခံလိုက်ပြီး အဝတ်အစားတွေဘာတွေကောက်လဲ သူလာခေါ်မဲ့အချိန်ကို စောင့်နေခဲ့တယ်။ သူလာတော့ ညနေ ၆နာရီလောက်ရှိပြီ။ ဘီယာပုလင်းလေးတွေ ကိုင်လို့ မြည်းစရာမုန့်လေးဘာလေးဝယ်ရင်း သွားနေကျ ကန်ဘောင်ကိုပဲ လှည်းတန်းကနေ နှစ်ယောက်သား လမ်းလျှောက်လာကြတယ်။
ညနေစောင်းမို့ ပြည်လမ်းပေါ်က တဝှီးဝှီးဖြတ်သွားကြတဲ့ကားတွေနဲ့အတူ ဆောင်းတွင်းလေ ချမ်းစိမ့်စိမ့်က ကျွန်မတို့ကိုယ်ပေါ်ကို ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်နေတယ်။ အေးကနဲဖြစ်သွားတဲ့ပါးနဲ့ နားရွက်တွေကို ဂျင်းဂျတ်ကတ် လက်ရှည်ဝတ်ထားတဲ့ လက်တွေနဲ့ကိုင်အုပ်ရင်း ဆွယ်တာ လက်စက ခပ်ပါးပါးပဲဝတ်လာတဲ့သူ့ကို ချမ်းဘူးလား..လို့ လှမ်းမေးလိုက်တယ်။ သူက ခေါင်းရမ်းရင်း သောက်လိုက်ရင်နွေးသွားမှာတဲ့။ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်စကားတပြောပြောနဲ့ ကန်ဘောင် အစွန်က ကျောက်တုန်း ပန်းခြံလေးထဲ ဝင်ထိုင်လိုက်ကြတယ်။ အဲဒီ့နေရာက ကျောက်တုန်းနဲ့ သစ်ပင်တွေကွယ်နေလို့ ဘီယာပုလင်းတွေကို လူမြင်သူမြင်ကြီး မော့စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
နှစ်ယောက်သား ဘီယာလေးမော့ရင်း ဝယ်လာတဲ့ကြက်ကြော်လေးမြည်းရင်း ရင်မောရတဲ့ကိစ္စလေးတွေရင်ဖွင့်ရင်းပေါ့။ ကျွန်မကတော့သိပ်များများစားစားမောစရာမရှိဘူးရယ်။ ပျော်လို့သာရန်ကုန်မှာအလုပ်လာလုပ်နေတာ ပဲခူးမှာနေလည်း ကျွန်မတို့ မိသားစုကပြည့်စုံကြတယ်။ အခုလည်း ရတဲ့လစာ ကိုယ်သုံးတာ မလောက်တဲ့အပြင် အိမ်ကတောင် လှမ်းပေး နေရသေးတယ်လေ။ အလုပ်ကလည်း တစ်ခါတလေစိတ်ရှုပ်စရာလေးတွေရှိတတ်ပေမဲ့ ပြေလည်သွားတော့လည်း ပြီးသွားတာပဲမဟုတ်လား။ ကိုယ်စိတ်တိုင်းမကျတဲ့အချိန် ထွက်လိုက်ရုံဆိုပေမဲ့ အတွေ့အကြုံလည်းရအောင် contract သုံးနှစ်လည်းပြည့်အောင်တော့ မကျေနပ်တာလေးတွေသည်းခံပြီး လုပ်နေရုံပဲ။
သူကလည်း သူ့အလုပ်အကြောင်း အဆင်မပြေသေးတာလေးတွေပြောပြတာပေါ့။ ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းပြောကြရင်း ကျွန်မအရမ်းချစ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ ရီးစားဟောင်းအကြောင်း သူကမေးလာတယ်။ ဘီယာအရှိန်ရီဝေဝနဲ့ အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပြန်စဉ်းစားရတာ တမျိုးကြီးရယ်။ အတိတ်ကိုပြန်ရောက်သွားသလိုမျိုး ကျွန်မရဲ့ လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေးအသံတွေကို နားထောင်နေရင်း နာကျည်းစရာအခန်းတွေရောက်တော့ သူက တော်ပါတော့ဟာတဲ့။ ငါမေးမိတာဆောရီးတဲ့။ ပြောရင်းနဲ့ ကျွန်မလက်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားတယ်။ ဝဲတက်လာတဲ့ မျက်ရည်တွေကို သူမမြင်အောင် မျက်တောင်ပုတ်ခက်ပုတ်ခတ်လုပ်ပြီး ခေါင်းကိုငုံ့လိုက်တာတောင် သူကမြင်ဖြစ်အောင် မြင်သွားသေးတယ်။
ကျွန်မလက်တစ်ဖက်ကိုသူကကိုင်ထားပြီး ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဘီယာပုလင်းကို ကိုင်ထားတာ ကြောင့် မျက်ရည်တွေသုတ်ဖို့ လက်မအားတဲ့ကျွန်မရဲ့မျက်နှာကို သူကမေးစေ့ကနေဆွဲကိုင်ပြီး မျက်ရည်တွေသူ့လက်နဲ့သုတ်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်မကိုစိုက်ကြည့်ရင်း နင့်နင့်နဲနဲ စကားတစ်ခွန်းပြောတယ်။ “အဲ့ဒီကောင်အရမ်းကံကောင်းတယ်” တဲ့။ ကျွန်မရင်ထဲဆို့နင့်နင့်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ရင်ထဲကငြိမ်နေတဲ့မီးတောင်ကို သွားဆွလိုက်သလိုပဲ ချော်ရည်ပူပူတွေကျွန်မနှလုံးသားကို ဖုံးလွှမ်းနေပြီလေ။ သူက စကားစပြတ်အောင်မျက်နှာလွှဲပြီး တခြားအကြောင်းတွေ လျှောက်ပြော နေပေမဲ့ ကျွန်မစိတ်မဝင်စားနိုင်တော့ဘူး။ တုံ့ပြန်သံတိတ်နေတဲ့ကျွန်မကို သူကစကားပြောနေရင်းတန်းလန်း လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်း သက်ပြင်းတစ်ချက်ချတယ်။
ကျွန်မတို့ကြားခြားနေတဲ့ ကျောက်တုံးလေးပေါ်ပြောင်းထိုင်လိုက်ပြီး ကျွန်မကို ဖက်ထားရင်းက သူငြီးတယ်။ ငါ့ညီမရယ်…တဲ့။ သူ့ရင်ခွင်ထဲကို ခေါင်းမှီလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မဆီက ရှိုက်သံသဲ့သဲ့လေးထွက်လာတယ်။ သူကြားမကြားတော့မသိဘူး။ စကားကို ဆက်လိုက်တယ်။ ငါနင့်ကို အရမ်းချစ်တယ်ဟာ…တဲ့။ အင်…….။ ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်းတစ်ခုကိုကြည့်နေရင်း pause ကိုနှိပ်လိုက်သလိုမျိုးပဲ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ကျွန်မခံစားချက်တွေ တိခနဲရပ်သွားတယ်။ မျှော်လင့်ပြီးသားစကားဆိုပေမဲ့ မမျှော်လင့်တဲ့အချိန်မှာ ကြားလိုက်ရတာမို့ ကျွန်မရုတ်တရက်ကြောင်တောင်တောင်လေးဖြစ်သွားတာရယ်။
အင်…ဆိုပြီး မသဲမကွဲအသံနဲ့အတူ ကျွန်မသူ့ကိုခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တယ်။ တစ်ခြားအချိန်တွေဆို ထားပါတော့။ ဒီလိုအချိန်ကြီးမှာ သူပြောလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မထင်မထားဘူး။ တကယ်ထင်မထားဘူး။ သူကတော့ ဖီးလ်အပြည့်နဲ့ ဆက်ပြောနေတယ်။ “ငါနင့်ကိုချစ်နေခဲ့တာကြာပြီ….ငါ့ဘဝငါ့အခြေအနေနဲ့ နင်စိတ်ဆင်းရဲမှာဆိုးလို့ပြောဖို့ချိန်ဆခဲ့ရတာ… နင်ခုလိုမျိုး တခြားတစ်ယောက်အတွက်ငိုနေတဲ့မျက်ရည်တွေကို ငါ့မကြည့်ရက်ဖူးဟာ………ပြီးတော့ နင်ဒီလိုအချစ်ကြီးပုံမျိုး ငါတစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး…….ငါလေးလည်းလေးစားတယ် အားလည်းအားကျတယ်…. ဒါတွေနားထောင်ရတော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ငါတို့ချစ်သူဖြစ်လာခဲ့ရင်တောင် နင်သူ့ကိုချစ်တဲ့အချစ်မျိုး တဝက်လောက်တောင် ငါမရရင် မရပါစေ… ငါကတော့နင့်ကိုအဲလိုမျိုးချစ်သွားချင်တယ် သိလား…”
အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်မကို ဒေါသဖြစ်သလိုလို ရှက်သလိုလို စိတ်တွေက လှုပ်နိုးလိုက်သလိုပဲ။ကျွန်မအချစ်က သူပြောသလို လေးစားလောက်တဲ့အချစ်မျိုးလို့လည်း ကျွန်မတစ်ခါမှမခံယူဘူးပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် နိမ့်ကျတဲ့ သူများကိုမှီခိုလိုစိတ်လွန်ကဲလွန်းတဲ့ အချစ်လို့ပဲ သတ်မှတ်ဖူးတယ်။ ပြီးတော့ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ရောပြီး ပြောလိုက်တဲ့ သူ့ရီးစားစကား………. ကျွန်မ မကြိုက်ဖူးရယ်။ ဘယ့်နယ့်….ရီးစားစကားဆိုတာ နှစ်ယောက်သား ကြည်ကြည်နူးနူးနဲ့ စိတ်လက်ကြည်သာဖြစ်နေတုန်း ပြောရမဲ့ဟာကို။ ငိုနေတဲ့ကျွန်မနှုတ်ခမ်းတွေက အခုဆို ခပ်ဆူဆူဖြစ်ပြီး သူ့ကိုရန်တွေ့ဖို့ပြင်နေပြီ။
“ဒီမယ် ကိုလတ်ဇင်ကြီး…….သူများက ဝမ်းနည်းပြီးပြောပြနေပါတယ်ဆိုမှ ရှင်က ရီးစားစကားဖမ်းပြောတာ ကောင်းသလား……..အရင်အကြောင်းတွေနဲ့ ရှင်အခုပြောတာနဲ့ ဘားမှလည်းဆိုင်ဖူး…. ပွဲလန့်တုန်းဖျာခင်းချင်တဲ့ သဘောလား…….ပွဲက မလန့်တော့ဘူး ပြီးသွားတာကြာပီ သိရဲ့လား……….. ပြောမယ်ဆိုလည်း အချိန်လေး အခါလေး မရွေးဘူး… တကယ်စိတ်လေတယ်…တော်ပြီ ပြန်မယ်” ပွစိပွစိနဲ့ကျွန်မပြောရင်း ထရပ်လိုက်ပြီး ပြန်ဖို့ခြေလှမ်းပြင်လိုက်တယ်။ ဘီယာပုလင်းတွေလည်းကုန်ပြီလေ။ ဘောက်ဆတ် ဘောက်ဆတ်နဲ့ ရှေ့ကသွားတဲ့ ကျွန်မခြေလှမ်းကိုအမှီလိုက်လာရင်း ဟာ…ငါကအဲလိုသဘောမဟုတ်ပါဖူးဟာ ဘာညာနဲ့ ပြူးပြူးပြဲပြဲလိုက်ရှင်းပြနေပြန်တယ်။
ကျွန်မကတစ်ခွန်းမှ ပြန်မပြောဘဲ နှုတ်ခမ်းကိုက်ရင်း စူတူတူမျက်နှာပေးနဲ့ လမ်းကိုသုတ်သုတ်လျှောက်နေတယ်။ ခဏကြာတော့ သူလည်း ဗလုံးဗထွေးတွေပြောနေတာရပ်လိုက်ပြီး မျက်နှာသေလေးနဲ့ ငြိမ်ငြိမ်လေးလိုက်လာတယ်။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လည်း သူ့အမှားမဟုတ်ပါဖူး။ ကျွန်မဘာသာရှက်ရမ်းရမ်းပြီး ဖြစ်သွားတာ။ ကျွန်မသူ့ကို သနားလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ချက်ချင်းကြီးတော့အဖြေပေးဖို့ တွန့်နေတယ်။ ခုပဲစိတ်ဆိုးထားတာလေ။သနားခြင်း၊ ဂရုဏာသက်ခြင်းကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချစ်ဆိုတာလည်း တော်တော်အင်အားကြီးတယ်လို့ ကျွန်မထင်တယ်။ တစ်ခါတလေကျတော့လည်း သနားတယ်ဆိုတာ အခြေအနေအဆင့်အတန်းတွေနဲ့ မဆိုင်ဘဲ မိန်းကလေးတွေစိတ်ထဲမှာ အလိုလိုပေါက်ပွားလာတဲ့ မေတ္တာစိတ်မျိုးပါ။
ဥပမာ….သူ့ဘာသာ တစ်ခေါခေါ အိပ်ပျော် နေတဲ့ ယောက်ျားကို သူ့မိန်းမက အော်…ငါ့ယောက်ျားအိပ်နေတာလေးများ…သနားစရာလေးပါလား…ဆိုပြီး အလကားနေရင်းသနားပြီးချစ်စိတ်ဝင်နေမိတာမျိုးပေါ့။ အခုလည်း ကျွန်မ ကိုလတ်ဇင်ကိုသနားမိနေပြန်ပီ။ သူ ကျွန်မကို ဖွင့်ပြောလိုက်လို့ ကျွန်မစိတ်ဆိုးသွားပီထင်ပြီး တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက် တွေ့တိုင်းမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဖြစ်နေတော့ ကျွန်မလည်း ဂရုဏာစိတ်တွေ တစ်စိမ့်စိမ့်ယိုဖိတ်ပြီး ပြန်ချစ်လိုက်မိပါတော့တယ်။ သူက သူ့ကိုမောင်လို့ခေါ်ခိုင်းတယ်။ ကျွန်မကိုတော့တစ်ခါတလေလည်းကလေးလေးလို့ခေါ်တယ်။ သဲ လို့လည်း ခေါ်တယ်..သူစိတ်ကူးပေါက်ရင်ပေါက်သလိုပေါ့။ မောင်က ကျွန်မဆီကချစ်အဖြေပြန်ရဖို့တောင် မမျှော်လင့်ခဲ့ဖူးလို့ ပြောပြပါတယ်။ မောင် ကျွန်မကို ကြင်ကြင်နာနာနဲ့တန်ဖိုးထားချစ်သလိုကျွန်မကလည်း မောင့်ရဲ့ရိုးသားခြင်းတွေကို တန်ဖိုးထားပါတယ်။
သူ့ကိုဒီအရွယ်အထိလူပျိုလားလို့မေးတော့ ရီပြီး သူ့ရီးစားဟောင်းတွေအကြောင်း ကျွန်မကို အကုန်ပြောပြတယ်။ အသက်ပဲသုံးဆယ်ကျော်နေပီ အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့လူပျိုဆိုတာဘယ်ရှိမလဲနော့်။ ဒါပေမဲ့ သူက အဲဒီ့ကိစ္စတွေမှာ တဇွတ်ထိုးမလုပ်ဘဲ ကျွန်မဆန္ဒကိုဦးစားပေးပါတယ်။ ခုချိန်ထိ နမ်းတာလောက်ကလွဲရင် ကျွန်မတို့ကြား ဘာမှမဖြစ်ကြသေးဘူး။ စစခြင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှတ်တရလေးကလည်း နဲနဲရီရပါတယ်။ အဲဒီ့နေကမောင့်တိုက်ခန်းမှာသူငယ်ချင်းတွေစုပြီးသောက်ကြစားကြတယ်။ မောင့်အဖေက ဘုရားဖူး ခရီးသွားနေတယ်လေ။ ပုလင်းဆွဲတဲ့သူကဆွဲ ဘီယာဆွဲတဲ့သူကဆွဲ ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့သူတွေလည်းပါတော့ အချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိ ပွဲကောင်းနေကြတာ။
ကျွန်မက နောက်ဖေးမီးဖိုချောင်မှာ ရောက်နေတုန်း ဘယ်အချိန်ထပြန်သွားကြလဲ မသိလိုက်ဖူး။ မောင် အနားကပ်လာတော့ “အသံတွေတိတ်သွားတယ် ဘယ်ရောက်ကုန်ကြလဲ” လို့ဘေစင်မှာ ပန်းကန်တွေ ဆေးနေရင်းက လှည့်မကြည့်ဘဲ မေးလိုက်တယ်။ “ပြန်သွားကြပြီ” လို့ပြောလိုက်တဲ့မောင့်လေသံက ဘာကြောင့်မှန်း မသိ တုန်တုန်ရင်ရင်ကြီးဖြစ်နေသလိုပဲ။မောင်ကအနောက်ကနေ ကျွန်မကိုသိုင်းဖက်ထားလိုက်ပြီး ဆံပင်တွေစည်းထားလို့ ရှင်းနေတဲ့လည်ကုတ်လေးကို ပါးစပ်နဲ့ဖိနမ်းလိုက်တယ်။ တစ်အိမ်လုံးမှာ မောင်နဲ့ကျွန်မပဲ ရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိကြောင့် ကျွန်မရင်ခုန်သံတွေမြန်လာတယ်။ မောင့်ရင်ဘတ်နဲ့ကပ်နေတဲ့ ကျွန်မနောက်ကျောကလည်း မောင့်ရင်ခုန်သံ ကို ခံစားမိနေတယ်။
ဆေးပြီးသွားတဲ့ပန်းကန်ကို ဘေးမှာလှမ်းထားလိုက်တုန်းရှိသေး မောင်က ကျွန်မကိုယ်ကိုဆွဲလှည့်လိုက်တယ်။ သောက်ထားတဲ့အရက်နဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ရင်ခုန်သံက နားထင်တွေအထိ တဒိတ်ဒိတ်နဲ့ပျံ့လာသလိုပဲ။ မောင်နဲ့ ကျွန်မ ပူးပူးကပ်ကပ်လေးဖက်ထားရင်းရပ်နေကြတယ်။ မောင်က ကျွန်မခေါင့်းကိုကိုင်ပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကို စုပ်ယူနမ်းရှိုက်လိုက် တယ်။ မောင့်ရဲ့အနမ်းတွေက ချိုမြိန်လှပါတယ်။ မောင့်ရဲ့လျှာ ကျွန်မပါးစပ်ထဲတိုးဝင်လာတော့ သောက်ထားတဲ့ အရက် ကြောင့်လားမသိ ကြမ်းရှရှလေးဖြစ်နေသလိုပဲ။ နမ်းနေရင်းကလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကျွန်မခါးကိုကိုင်မြှောက်လိုက်ပြီး ဘေစင်ဘေးကအုတ်ခုံအလွတ်ပေါ်မြှောက်တင်လိုက်တယ်။
ဘောင်းဘီအတိုလေးဝတ်ထားတဲ့ကျွန်မပေါင်တွေ ကြားထဲကို မောင့်ကိုယ်လုံးကရောက်နေပြီ။ မောင့်လက်တွေက ကျွန်မရင်သားတွေကို အကျီပေါ်ကနေကိုင်ရတာ အားမရတော့သလို အကျီကြယ်သီးတွေကိုတစ်လုံးခြင်းဖြုတ်နေတယ်။ မူးနေပေမဲ့ စိတ်အသိကြောင့် ပြတင်းပေါက်တွေကနေ တဖက်တိုက်ခန်းတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သေးတယ်။ မောင်တို့တိုက်ခန်းကအပေါ်ဆုံးထပ် ဖြစ်ပြီးဘေးမှာလည်း အဲလောက်မြင့်တဲ့တိုက်ခန်းမရှိတာကြောင့်တိမ်ဖြူဖြူတွေနဲ့ ကောင်းကင်ပြာပြာကိုပဲ ကျွန်မလှမ်းမြင်နေရတယ်။ ကျွန်မဝတ်ထားတဲ့ဘရာကိုခွာချပြီး ရင်သားတွေကိုမောင့်ပါးစပ်နဲ့စုပ်နမ်းနေရင်း ကျွန်မရဲ့ဘောင်းဘီကိုပါ ဆွဲပြီးချွတ်လိုက်တယ်။ ပန်တီကလည်းဘောင်းဘီနဲ့အတူရောပါသွားပြီ။
ကျွန်မကိုင်ထားတဲ့မောင့်ခေါင်းက အောက်ကို တထစ်ချင်းနိမ့်ဆင်းသွားတယ်။ကျွန်မရဲ့ပေါင်တွင်းသားတွေကို သွားမပါဘဲ နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ဟိုစုပ်ဒီစုပ်လုပ်လိုက်တော့ ကြက်သီးတွေတောင်တဖြန်းဖြန်းထကုန်တယ်။ ရင်တွေခုန်တာလည်း ပေါက်ထွက်တော့မဲ့အတိုင်းပဲ။ ကျွန်မရဲ့ ပိပိလေးကို မောင်က လျှာမသုံးသေးဘဲအသာဖိကပ်ပြီးနမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ နှုတ်ခမ်းကိုက်ထားတဲ့ကြားက အီးးးကနဲတစ်ချက်အော်မိတယ်။ နှုတ်ခမ်းနဲ့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက် အသာစုပ်ဆွဲပြီးတော့မှ လျှာကိုချွန်ချွန်လေးလုပ်ပြီး အထဲကိုထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ “အဟင့်ဟင့်….မောင်ရယ်ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလဲကွယ်…” အဲသလိုအသံမျိုးကျွန်မဆီကထွက်မလာပါဘူး။ဘယ်ထွက်မလဲ။ မျက်လုံးစုံမှိတ် နှုတ်ခမ်းကိုကိုက်ပြီးအပီအပြင် ခံစားနေတာ။
မျက်စိဖွင့်လိုက်ရင်လည်း မြင်နေရတဲ့ကောင်းကင်မှာ လေဟုန်စီးနေရသလိုပဲ ဝဲကနဲဝဲကနဲ လွင့်လွင့် တက်သွားတယ်။ မောင်ကသူ့လျှာကို ကျွန်မကိုယ်အတွင်းသားတွေထဲကို အစွမ်းကုန်ထိုးသွင်းနေရုံတင်မကဘူး ထိပ်ကအစေ့လေးကိုပါ လက်မနဲ့လှမ်းကလိလိုက်တော့ အီးးးးးးးး ကျွန်မပေါင်တွေတောင်တဆတ်ဆတ်တုန်တယ်။ အဲလိုမျိုး သုံးလေးခါလောက် လုပ်နေရင်းက လျှာကိုပြန်ထုတ်ပြီး အထက်ကနေအောက်အစုန်အဆန်ပင့်ပြီး လျက်လိုက်တော့ ကျွန်မရင်ထဲ ရိုလာကိုစတာစီးရသလို ဒိုင်းကနဲဆောင့်တက်ပြီးမှ ဟာကနဲနိမ့်ဆင်းသွားတာ ဘေစင်ပေါ်ကပြုတ်ကျတော့မယ်မှတ်ပြီး အစွန်းတစ်ဖက်ဆီကိုလက်နဲ့ လှမ်းကိုင်ထားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်မ ခံစားမှု အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်သွားပြီးတဲ့အချိန်အထိ ထွက်လာတဲ့အရည်ကြည်တချို့ကို မောင်ကလျက်ပေးနေတုန်းပဲ။
သောက်ထားတဲ့အရက်နဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ရင်ခုန်သံက နားထင်တွေအထိ တဒိတ်ဒိတ်နဲ့ပျံ့လာသလိုပဲ။ မောင်နဲ့ ကျွန်မ ပူးပူးကပ်ကပ်လေးဖက်ထားရင်းရပ်နေကြတယ်။မောင်က ကျွန်မခေါင့်းကိုကိုင်ပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကို စုပ်ယူနမ်းရှိုက်လိုက် တယ်။ မောင့်ရဲ့အနမ်းတွေက ချိုမြိန်လှပါတယ်။ မောင့်ရဲ့လျှာ ကျွန်မပါးစပ်ထဲတိုးဝင်လာတော့ သောက်ထားတဲ့ အရက် ကြောင့်လားမသိ ကြမ်းရှရှလေးဖြစ်နေသလိုပဲ။ နမ်းနေရင်းကလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကျွန်မခါးကိုကိုင်မြှောက်လိုက်ပြီး ဘေစင်ဘေးကအုတ်ခုံအလွတ်ပေါ်မြှောက်တင်လိုက်တယ်။ ဘောင်းဘီအတိုလေးဝတ်ထားတဲ့ကျွန်မပေါင်တွေ ကြားထဲကို မောင့်ကိုယ်လုံးကရောက်နေပြီ။
မောင့်လက်တွေက ကျွန်မရင်သားတွေကို အကျီပေါ်ကနေကိုင်ရတာ အားမရတော့သလို အကျီကြယ်သီးတွေကိုတစ်လုံးခြင်းဖြုတ်နေတယ်။ မူးနေပေမဲ့ စိတ်အသိကြောင့် ပြတင်းပေါက်တွေကနေ တဖက်တိုက်ခန်းတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သေးတယ်။ မောင်တို့တိုက်ခန်းကအပေါ်ဆုံးထပ် ဖြစ်ပြီးဘေးမှာလည်း အဲလောက်မြင့်တဲ့တိုက်ခန်းမရှိတာကြောင့်တိမ်ဖြူဖြူတွေနဲ့ ကောင်းကင်ပြာပြာကိုပဲ ကျွန်မလှမ်းမြင်နေရတယ်။ ကျွန်မဝတ်ထားတဲ့ဘရာကိုခွာချပြီး ရင်သားတွေကိုမောင့်ပါးစပ်နဲ့စုပ်နမ်းနေရင်း ကျွန်မရဲ့ဘောင်းဘီကိုပါ ဆွဲပြီးချွတ်လိုက်တယ်။ ပန်တီကလည်းဘောင်းဘီနဲ့အတူရောပါသွားပြီ။ ကျွန်မကိုင်ထားတဲ့မောင့်ခေါင်းက အောက်ကို တထစ်ချင်းနိမ့်ဆင်းသွားတယ်။
ကျွန်မရဲ့ပေါင်တွင်းသားတွေကို သွားမပါဘဲ နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ဟိုစုပ်ဒီစုပ်လုပ်လိုက်တော့ ကြက်သီးတွေတောင်တဖြန်းဖြန်းထကုန်တယ်။ ရင်တွေခုန်တာလည်း ပေါက်ထွက်တော့မဲ့အတိုင်းပဲ။ ကျွန်မရဲ့ ပိပိလေးကို မောင်က လျှာမသုံးသေးဘဲအသာဖိကပ်ပြီးနမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ နှုတ်ခမ်းကိုက်ထားတဲ့ကြားက အီးးးကနဲတစ်ချက်အော်မိတယ်။ နှုတ်ခမ်းနဲ့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက် အသာစုပ်ဆွဲပြီးတော့မှ လျှာကိုချွန်ချွန်လေးလုပ်ပြီး အထဲကိုထိုးသွင်းလိုက်တယ်။ “အဟင့်ဟင့်….မောင်ရယ်ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလဲကွယ်…” အဲသလိုအသံမျိုးကျွန်မဆီကထွက်မလာပါဘူး။ဘယ်ထွက်မလဲ။ မျက်လုံးစုံမှိတ် နှုတ်ခမ်းကိုကိုက်ပြီးအပီအပြင် ခံစားနေတာ။
မျက်စိဖွင့်လိုက်ရင်လည်း မြင်နေရတဲ့ကောင်းကင်မှာ လေဟုန်စီးနေရသလိုပဲ ဝဲကနဲဝဲကနဲ လွင့်လွင့် တက်သွားတယ်။ မောင်ကသူ့လျှာကို ကျွန်မကိုယ်အတွင်းသားတွေထဲကို အစွမ်းကုန်ထိုးသွင်းနေရုံတင်မကဘူး ထိပ်ကအစေ့လေးကိုပါ လက်မနဲ့လှမ်းကလိလိုက်တော့ အီးးးးးးးး ကျွန်မပေါင်တွေတောင်တဆတ်ဆတ်တုန်တယ်။အဲလိုမျိုး သုံးလေးခါလောက် လုပ်နေရင်းက လျှာကိုပြန်ထုတ်ပြီး အထက်ကနေအောက်အစုန်အဆန်ပင့်ပြီး လျက်လိုက်တော့ ကျွန်မရင်ထဲ ရိုလာကိုစတာစီးရသလို ဒိုင်းကနဲဆောင့်တက်ပြီးမှ ဟာကနဲနိမ့်ဆင်းသွားတာ ဘေစင်ပေါ်ကပြုတ်ကျတော့မယ်မှတ်ပြီး အစွန်းတစ်ဖက်ဆီကိုလက်နဲ့ လှမ်းကိုင်ထားလိုက်ရတယ်။
ကျွန်မ ခံစားမှု အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်သွားပြီးတဲ့အချိန်အထိ ထွက်လာတဲ့အရည်ကြည်တချို့ကို မောင်ကလျက်ပေးနေတုန်းပဲ။ ခဏကြာတော့မှ အားနာလာတာနဲ့ သူ့ခေါင်းကို ဆွဲထူပြီး မတ်တပ်ပြန်ရပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ပေါင်လေးကိုစိပြီး ဘေစင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့ ကျွန်မက အဖျားတက်သလို တုန်တုန်ယင်ယင်ကြီးဖြစ်နေတုန်းပဲ။ မောင့်ကို ကြည့်လိုက်တော့ သူကလည်း နွမ်းလျတဲ့ရုပ်နဲ့ ခြေမခိုင်သလိုဖြစ်နေတယ်။ “ဟင်..မောင်ဘာဖြစ်တာလဲ” “မောင်..မောင်လည်းပြီးသွားပြီ” “ဘာ” အမှန်တော့ကျွန်မက ကိုယ့်အရှိန်နဲ့ကိုယ်တက်နေလို့ သူပြီးသွားတာတောင်သတိမထားမိလိုက်တာ။
သူကတော့ ဘာအဝတ်အစားမှတောင်မချွတ်လိုက်ရပဲ ပြီးသွားလေရဲ့။ ကျွန်မ တခွိခွိရီမိတယ်။ ခုချိန်ထိ သူ့ပစ္စည်းကို ကိုင်လည်း မကြည့်ရသေးဘူး မြင်တောင်မမြင်ဖူးသေးဘူးလေ။ “ချွတ်လိုက်..ဘောင်းဘီကို” ကျွန်မခိုင်းတဲ့အတိုင်းမောင်ဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ ပျော့ကျနေတဲ့ မောင့်ဖွားဖက်တော်လေးက ဘွားကနဲပေါ်လာတယ်။ ကျွန်မရီချင်စိတ်ကိုထိန်းလိုက်ပေမဲ့ ပြုံးသွားတဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကို မောင်ကမြင်ဖြစ်အောင် မြင်လိုက်ပြီး “ဘာရီတာတုန်းကွ” လို့ မလုံမလဲပုံစံနဲ့လှမ်းမေးလိုက်တယ်။ “ခိခိ..သေးသေးလေး” ပြောမိပြီးမှ သူစိတ်များဆိုးသွားမလား ကြည့်လိုက်တော့ သူကစနေတယ်မှတ်လားမသိပါဘူး။
“အံမာ…ညည်းကဘယ်လောက်ကြီးတာမြင်ဖူးလို့တုန်း” “မောင့်ထက်ကြီးတာတော့ မြင်ဖူးတာပေါ့ ဟီးဟီး “.သူ့မျက်နှာမဆိုစလောက်လေးကွက်ခနဲပျက်သွားပြီးမှ အပြုံးယဲ့ယဲ့နဲ့ကျွန်မကိုကြည့်နေတယ်။ ကျွန်မစိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားတယ်။ မူးနေလို့သာ ပါးစပ်ကထွက်သွားတာပါ။ ပြီးတော့ မောင့်ပစ္စည်းကအရမ်းအသေးကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ထက် သေးတဲ့ပိစိကွေးနဲ့တောင်ကျွန်မကြုံဖူးတယ်လေ။ ခုက ပျော့နေတဲ့အချိန်မို့လည်းနေမှာပေါ့။ ကျွန်မမောင့်ကို ကြည့်ရင်း အလေးအနက်ပြောလိုက်တယ်။ “ဒါပေမဲ့ ကြီးတာသေးတာ အရေးမကြီးပါဘူးမောင်ရယ်…….ကျွန်မမောင့်ကိုချစ်တယ်”….. ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ဒါအျောရီဂငျြနယျပါ